စကားရည်လုပွဲ (ကော်လံ ၄၅၇) - အရှင်ဘုရား မိုက်ကယ်အေဗရာဟမ် (Othhipron) အကျပ်အတည်းကို ကြည့်ပါ။
စကားရည်လုပွဲ၏အလင်းတွင် Othhipron အကျပ်အတည်းကိုကြည့်ပါ (ကော်လံ ၄၅၇)
80 မှတ်ချက်များ	/ L. Adar A. 03 - 03/2022/XNUMX 03 / 03 / 2022
ယခင်ကော်လံတွင် ကျွန်ုပ်နှင့် ဒါဝိဒ်ဧနောက်ကြား အငြင်းအခုံကို တင်ပြခဲ့သည် (ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း) သည် အကျင့်စာရိတ္တ၏တရားဝင်မှုအတွက် အခြေခံအဖြစ် ဘုရားသခင်လိုအပ်သလား (သို့မဟုတ်: Is without all things permissible) ဟူသောမေးခွန်းအပေါ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ညှိနှိုင်းသူ (Jeremy Fogel) သည် ဆွေးနွေးမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ထင်ရသည့် Othhipron ၏ အကျပ်အတည်းကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ခဏကြာတော့ နွားတစ်ကောင်ကို သတိရတယ်။ 278 ငါသည် အကျပ်အတည်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်အထား (ဘုရားသခင်အပေါ် တွယ်တာခြင်း) အတွက် အကျပ်ရိုက်ခြင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဆွေးနွေးမှုတွင် ကျွန်ုပ်သည် အဆိုပါမေးခွန်းကို အတိုချုံးဖြေခဲ့ပြီး၊ ဤနေရာတွင် Enoch နှင့် စကားစစ်ထိုးခြင်းဆိုင်ရာ ၎င်း၏ဆက်စပ်မှုကို ရှင်းလင်းရန်နှင့် ထိုနေရာတွင် နှင့် ယခင်ကော်လံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကွဲပြားချက်များကို ထက်မြက်စေရန်အတွက် ဤပြဿနာကို ပြန်လည်တင်ပြပါမည်။
ဤကော်လံကို ငါကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ဘုရားသခင်၏ အယူအဆသည် ယခင်ကော်လံတွင် ငါလုပ်ဆောင်ခဲ့သော “ပျော့ပျောင်းသော” ဘုရားသခင်နှင့် လုံးဝမတူကြောင်း သတိပြုမိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တင်ပြသော အကြံပြုချက်အချို့သည် အကျင့်စာရိတ္တစည်းမျဉ်းများကို အကျိုးသက်ရောက်စေရန် လိုအပ်သော "ပိန်သော" ဘုရားသခင်၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သော ထပ်လောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်လံအဆုံးမှာ ဒီအမှတ်ကို ပြန်သွားမယ်။
Platonic ဆွေးနွေးပွဲတွင်၊ A. Eitifron အောက်ပါမေးခွန်းကို မေးသည်- ဘုရားအလိုရှိသောကြောင့် ကောင်းသလား၊ ဘုရားက ကောင်းတာကို လိုချင်လို့လားတဲ့။ တစ်နည်းဆိုရသော် မေးခွန်းမှာ ကောင်းမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိမရှိ၊ သို့မဟုတ် ကောင်းသောအရာသည် ဘုရားများ၏ အဆုံးအဖြတ် ဖြစ်သည်၊ သို့သော် အခြားမည်သည့် အမူအရာသည် ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အရာရာတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲ မှီခိုနေရတယ်။ Gd၊ Avi Sagi နှင့် Daniel Statman တို့နှင့်ပတ်သက်သော အလားတူမေးခွန်းမျိုးလည်း ၎င်းတို့၏စာအုပ်တွင် ပေါက်ကြားလာနိုင်သည်။ သီလနှင့် သီလဒီကိစ္စကို အလွန်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါ။ ၎င်းတို့၏ ကောက်ချက်မှာ ဂျူးလူမျိုး တွေးခေါ်ရှင် အားလုံးနီးပါးသည် နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအား ထောက်ခံကြသည်။ အထက်စာအုပ်ပါ ယေဘုယျအားဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ကွဲလွဲချက်များနှင့် အငြင်းအခုံများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်မသွားပါ (၎င်းတွင် မှားယွင်းမှုအချို့ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်) နှင့် နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အခြေခံကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ချုပ်နှောင်ထားပါမည်။
တစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဘုရားသခင်သည် အလုံးစုံသောတန်ခိုးရှိပြီး မည်သည့်အရာကိုမျှ လက်အောက်ခံမဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ ကိုယ်တော်မှတပါး အဘယ်သူမျှမရှိ။ သူသည် ဤလောကကို ဖန်ဆင်းပြီး ယင်း၌ အကျုံးဝင်သော ဥပဒေများကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ သူသည် ၎င်းတို့အား သူစိတ်ကူးနိုင်သည့် အခြားနည်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကောင်းနှင့်အဆိုးကို ရည်မှန်းထားခြင်း မရှိပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဤအမြင်ကို လက်ခံပါက ဘုရားသခင်သည် ကောင်းမြတ်သည်ဟု ဆိုရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတော်ကောင်းဖြစ်သည်ဟူသော အဆိုသည် သူနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ သတ်မှတ်သတ်မှတ်ထားသော ကောင်းမှုတစ်ခုရှိသည်ဟု ယူဆသည်၊ ငြင်းခုံချက်မှာ သူ၏ အပြုအမူနှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့် တူညီသော ရည်ရွယ်ချက်စံနှုန်းတို့အကြား အံဝင်ခွင်ကျရှိနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် ကောင်းသောသဘောတရားကို သတ်မှတ်သည့် သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းမြတ်သည်ဟူသော ပြောဆိုချက်သည် tautological အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသီအိုရီ) မှလွဲ၍ အငြင်းအခုံမဟုတ်ပေ။ အခြေခံအားဖြင့် ဆိုလိုသည်မှာ- ဘုရားသခင်သည် သူလိုချင်သောအရာကို လိုချင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ငါတို့အားလုံးအတွက် မှန်ပါတယ်။
ဓမ္မပညာရှင် အများအပြား (နှင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူ နည်းပါးသူများပင်) ဤအရာသည် ပြဿနာရှိသော အနေအထားဟု ယူဆကြပါသည်။ ဘုရားသခင်က တကယ်ကောင်းပြီး တခြားနည်းနဲ့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဤသည်မှာ ကောင်းသောအရာကို ယထာဘူတကျကျ သတ်မှတ်သည်ဟု ယူဆပြီး သူ၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွင် ဘုရားသခင်သည် ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီး အကောင်းနှင့်အဆိုးကို မခွဲခြားနိုင်စေရန် မျက်စိမှိတ်ထားနိုင်သော်လည်း အကောင်းနှင့်အဆိုးကို အခြားနည်းဖြင့် မဆုံးဖြတ်နိုင်ပေ။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဓမ္မဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြားမှ ဂျူးအတွေးအခေါ် တွေးခေါ်ရှင်အများစုသည် ဒုတိယချဉ်းကပ်မှုကို ကိုင်စွဲထားပုံရသည်။
ပထမပဋိသန္ဓေနေခြင်းကို အနည်းငယ် သန့်စင်စေပြီး အောက်ပါအတိုင်း ပုံဖော်နိုင်သည်- ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကောင်းနှင့်အဆိုးကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ငြင်းခုံချက်မှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သည် တူညီသော ပင်ကိုယ်သဘောနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ဤပင်ကိုယ်ဥာဏ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၌ စိုက်ထားသောကြောင့် အကောင်းနှင့်အဆိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမှန်တကယ်မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ဤပြောဆိုချက်သည် အမှန်ပင် (အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မဟုတ်ပါ) ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အယူအဆများနှင့် လောကကိုသာမကဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ အယူအဆများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုယ်တိုင်အတွက်မူ "ဘုရားသခင်သည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၏" ဟူသောစကားသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ မဆိုလိုပါ (၎င်းသည် အချည်းနှီးသော ဝိသေသလက္ခဏာ၊ တင်းတိမ်ခြင်း) ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်နှင့် သင်ကြားမှုကြား ဆက်နွယ်မှု ပြဿနာ၏ သီးခြားကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော ဒဿနပညာရှင်များ အသုံးပြုလေ့ရှိသော ဥပမာတစ်ခုကို ယူခြင်း (ဥပမာ ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ), The claim: the star of the star is the night of the star. ဒါကို မတူညီတဲ့ ကြယ်နှစ်စင်းအဖြစ် အချိန်အတော်ကြာ စဉ်းစားထားပြီးပြီ (တစ်ခုက ညနေမှာ မြင်ရပြီး နောက်တလုံးကို မနက်ခင်းမှာ တွေ့ရတယ်) ဒါပေမယ့် အဆုံးမှာတော့ အဲဒီကြယ်ကိုယ်တိုင်က အတူတူပဲဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ကို မေးသည်- ဤတောင်းဆိုမှုသည် အချည်းနှီးသော တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သီအိုရီ) ဖြစ်ပါသလား။ ၎င်းတွင် မည်သည့်အကြောင်းအရာရှိပါသလော သို့မဟုတ် ၎င်းသည် အချည်းနှီးသော တင်းတိမ်ခြင်းဖြစ်ပါသလား။ အပြင်ပန်းအားဖြင့် ထိုဝါကျသည် အရာတစ်ခုနှင့် သူ့အလိုလိုကြားရှိ အမှတ်သညာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ဒါပေမယ့် ဒီဝါကျမှာ အသစ်အဆန်းတွေ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံယူချက်က ဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အယူအဆများအကြောင်း တစ်ခုခုကို သင်ပေးပါသည်။ ကြယ်နှစ်လုံးက မတူဘူးထင်တဲ့ ကြယ်နှစ်လုံးက အတူတူပါပဲ။ ဤဝါကျသည် ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက် အကြောင်းအရာအရ အချည်းနှီးသော အမှတ်အသားတစ်ခုကဲ့သို့ ထင်ရသော်လည်း ဤဝါကျသည် ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။
အမျိုးအစား၏ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အရေးဆိုမှုတိုင်းအတွက် ဤအချက်ဖြစ်သည်-aသည်bဖြစ်သည်။ ဤပြောဆိုချက်သည် မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆပါက၊ အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာais a, i.e. အချည်းနှီးသော tautology ဖြစ်သည်။ အထောက်အထားတောင်းဆိုမှုများ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ပြဿနာအတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြေရှင်းချက်မှာ အဓိပ္ပါယ်နှင့် သင်ကြားမှုကြား ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော ဒဿနိကပညာရှင် (Frege ကို လိုက်နာသူ) က ထိုသို့သော ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုအရ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော်လည်း ညွှန်ကြားချက် (သို့မဟုတ် အရောင်) ဟူ၍ မရှိပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အချည်းနှီးမဟုတ်၊ အသေးအဖွဲမဟုတ်သော အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိသော်လည်း ၎င်းသည် လောကကြီးတွင် ညွှန်ပြနေသည့်အရာများကို ကြည့်လျှင် ၎င်းသည် အသေးအဖွဲအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် Othhipron အကျပ်ရိုက်မှုသို့ ပြန်သွားနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အကောင်းနှင့်အဆိုးကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်ဘက်တွင်၊ သူတော်ကောင်းဟူသည့်စကားသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော်လည်း သွန်သင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း စောဒကတက်နိုင်သည်။ သြဝါဒ (အရောင်) ဟူသော ဝေါဟာရသည် ကောင်း၏ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို၍ ကောင်းသည် ဖြစ်သောကြောင့် အချည်းနှီးဖြစ်၏။ သူလုပ်သမျှဟာ ကောင်းခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အောက်မှာ ထားခဲ့မှာမို့ Amira သူတော်ကောင်းဟာ အကြောင်းအရာ (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) ချည်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီလို ညင်သာတဲ့ စကားလုံးကိုတောင် လက်ခံဖို့ ခက်တယ်။ ရိုးရှင်းသောခံစားချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် အမှန်ပင် ကောင်းမြတ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သူကောင်းသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ အချည်းနှီးသော အဓိပ္ပါယ် မဟုတ်ဘဲ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့မဟုတ်ပါက၊ ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်း၌ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိသလို၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကျင့်ပျက်သည်ဟုထင်ရသည့် အလေ့အကျင့်များ (ဥပမာ- ဣဇာက်၏ချည်နှောင်မှု၊ အာမလက်ပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့သော၊ ကြိုက်သည်)။ ဘုရားသခင်အလိုရှိသောအရာကို ကောင်းသည်ဟု သတ်မှတ်ပါက ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ သံသယများအတွက် နေရာမရှိဟု နားလည်ထားသင့်သည်။ ဣဇာက်နောက်သို့ လိုက်ရန် မှာထားသောကြောင့် ဣဇာက်၏ ချည်နှောင်ခြင်းသည် ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တအကြား ကွဲလွဲနေသကဲ့သို့ ခံစားချက်က ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အစပြုချက်ကို ထောက်ပြသည်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ငြင်းခုံမှုတစ်ခု တည်ရှိနေခြင်းသည် ကျင့်ဝတ်၏ ဦးတည်ချက်ကို ညွှန်ပြနေသကဲ့သို့ (မဟုတ်ပါက ငြင်းခုံစရာအကြောင်းမရှိပါ)၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဝေဖန်ချက်တစ်ခု တည်ရှိနေခြင်းသည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ညွှန်ပြသည် (မဟုတ်ပါက သိက္ခာမဲ့သော သဘောထားများကို ဝေဖန်ရန် နေရာမရှိပေ။ အပြုအမူ)။
နိဂုံးချုပ်ချက်မှာ ရိုးရှင်းသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား Othhipron အကျပ်ရိုက်မှု၏ တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေဖြင့် ဘုရားသခင်ကပင် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျနှင့် အတင်းအဓမ္မ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည်ဟု သွန်သင်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဘုရားသခင် အလိုရှိသောအရာများသည် ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်ပြီး အခြားနည်းလမ်းမဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သာ ကောင်းသည်ဟု စောဒကတက်နိုင်ပြီး မှားယွင်းသော အပြုအမူအတွက် (သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းချက်ရှာရန်) ကိုလည်း ဝေဖန်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီချဉ်းကပ်မှုဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်အခက်အခဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး အခုကျွန်တော် ဆက်ပြီးဖြေရှင်းသွားပါ့မယ်။
ရူပဗေဒနိယာမများနှင့် ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ "နိယာမများ" အကြား
ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး အရာခပ်သိမ်းကို တန်ခိုးတော်ဖြင့် ဖန်ဆင်းထားသည့် ဘုရားသခင်သည် သူမပြဋ္ဌာန်းသော ပြင်ပဥပဒေများ၏ လက်အောက်ခံအဖြစ် မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ ဒါကို နားလည်ဖို့၊ ဥပဒေ အမျိုးအစား နှစ်ခုကြားက ဒီမှာ လုပ်ထားတဲ့ ခြားနားချက်ကို ပြန်သွားရမှာ (ဥပမာ ကော်လံကို ကြည့်ပါ။ 278) ဘုရားသခင်သည် ရူပဗေဒနိယာမများကို လက်အောက်ခံမဟုတ်ပေ။ သူသည် နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများကို လက်အောက်ခံမဟုတ်ပါ (သူသည် နိုင်ငံသားမဟုတ်သောကြောင့်သာ)။ သို့သော် အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ၎င်းသည် ယုတ္တိဗေဒ၏နိယာမများကို သေချာပေါက် "ဘာသာရပ်" ဖြစ်သည်။ ယုတ္တိဗေဒနိယာမများသည် ဘုရားသခင်အပေါ် “အတင်းအကြပ်” ခံနေကြရသည်။ သူသည် တြိဂံအဝိုင်းကို ဖန်တီးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ယုတ္တိဗေဒမှ သွေဖည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် တြိဂံသည် အဝိုင်းမဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာ တြိဂံအပေါ် မလိုအပ်ဘဲ ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏ သဘောသဘာဝအရ ဖြစ်သည်။ တြိဂံအဖြစ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အားဖြင့် ၎င်းသည် အဝိုင်းမဟုတ်၊ အဝိုင်းမဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် အဝိုင်းတြိဂံဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းသည် Gd တွင် ချမှတ်ထားသော ပြင်ပကန့်သတ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ၎င်း၏စွမ်းရည်အားလုံးအပေါ် ကန့်သတ်ချက်မဟုတ်သည့်အပြင် ၎င်းတွင် အားနည်းချက်လည်း မရှိပါ။
အလုံးစုံသော အစွမ်းသတ္တိရှိသော သတ္တဝါသည် စိတ်ကူးစိတ်သန်း၌ပင် စိတ်ကူးနိုင်သမျှကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သို့သော် တြိဂံဝိုင်းသည် အချည်းနှီးသော အယူအဆဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အရာမျိုး မရှိတော့ဘဲ မတွေးဝံ့စရာပင်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့သောအရာကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသည် သူ၏စွမ်းရည်၌ အားနည်းချက်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် တြိဂံအဝိုင်းကို ဖန်တီးနိုင်သလားဟု မေးလာသူတစ်ဦးကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီသဘောတရားကို အရင်ရှင်းပြခိုင်းပြီးမှ ဖြေနိုင်မှာပါ။ (သူ့မှာ ချွန်ထက်တဲ့ ထောင့်တွေ ရှိသလား၊ မရှိဘူးလား၊ သူ့ရဲ့ ထောင့်ပေါင်းက ဘာလဲ၊ အဲဒီမှာရှိတဲ့ အမှတ်အားလုံးဟာ အဲဒီအမှတ်နဲ့ တူညီတဲ့ အကွာအဝေး ရှိသလား)၊ ဒီတော့ မေးခွန်းက ရှင်းပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလို၊ ရှုပ်ထွေးမှုကို အရင်းခံတဲ့အချက်က ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုမှာ မတူညီတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနဲ့ သုံးတဲ့ "ဥပဒေ" ဟူသော ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ ရူပဗေဒနိယာမများသည် ဖန်ဆင်းခြင်း၏သဘောသဘာဝတွင် ဘုရားသခင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများဖြစ်သည်။ ဤဥပဒေသည် မတူညီသောဖြစ်နိုင်ခြေများစွာဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ကမ္ဘာအတွက် သီးခြားသဘာဝတစ်ခုဖန်တီးရန် သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သူသည် အခြားသော သဘာဝ နိယာမများကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ယုတ္တိဗေဒနိယာမများသည် တူညီသောသဘောအရ ဥပဒေများမဟုတ်ပါ။ ယုတ္တိစကားအရ “ဥပဒေ” ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ချေးယူထားသည်။ ၎င်းသည် အရာဝတ္ထုများ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အပေါ် အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေသော ပြင်ပအရာမဟုတ်ပါ။ တြိဂံသည် အဝိုင်းမဟုတ်သလို တစ်စုံတစ်ယောက်က တားမြစ်ထားသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ တားမြစ်ထားသောကြောင့်လည်းကောင်း မဟုတ်ပေ။ တြိဂံဖြစ်ခြင်းကြောင့် လုံးပတ်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဤတွင် ဘုရားသခင်သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စနစ်များစွာထဲမှ ယုတ္တိဗေဒစနစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းမှာ မမှန်ပါ။ အခြားယုတ္တိစနစ်မရှိပါ။ ယခုမှစ၍ ယုတ္တိဗေဒနိယာမများနှင့်ဆင်တူသော စကားရပ်တွင် quotation marks များတွင် "ဥပဒေ" ဟူသော ဝေါဟာရကို ကျွန်ုပ်သုံးပါမည်။
အကျင့်စာရိတ္တ နိယာမ အခြေအနေ
ယခု ပေါ်ပေါက်လာသော မေးခွန်းမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ နိယာမများ ၏ အဆင့်အတန်း ဖြစ်သည်- ဤဥပဒေများသည် ရူပဗေဒ နိယာမများ ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် ယုတ္တိဗေဒ နိယာမများ ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်သော "ဥပဒေများ" ဖြစ်ပါသလား။ Othhipron အကျပ်အတည်း၏ ပထမဘက်ခြမ်းကို ထောက်ခံသူများသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ နိယာမများသည် ရူပဗေဒနိယာမများနှင့် ဆင်တူသည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အား ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပေးသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ အကျပ်ရိုက်မှု၏ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ "နိယာမ" များသည် ယုတ္တိဗေဒ၏ "နိယာမများ" နှင့် ဆင်တူသည်ဟု ယူဆသည် (၎င်းတို့သည် "ဥပဒေများ" မဟုတ်ဘဲ ဥပဒေများသာဖြစ်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ဘုရားသခင်အပေါ် အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။ သူသည် မတူညီသော ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူသည် အခြားကိုယ်ကျင့်တရားများ လွှမ်းမိုးမည့် ကမ္ဘာကို မဖန်တီးနိုင် (လူသတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော လုပ်ရပ်များဖြစ်သည်)။ အကျင့်စာရိတ္တအားဖြင့် လူသတ်ခြင်းကို တားမြစ်သည်။
သူသည် လူတို့ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကို ခံစားရမည့် ကမ္ဘာကို ဖန်တီးနိုင်သည် (ဤလောက၌ ၎င်းတို့ကို “ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း” ဟု ခေါ်ခြင်းသည် မှန်ပါသလော။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ နေရာမှာ ကံဆိုးခြင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကို ပန်းချီဆွဲတာဟာ ဘယ်ကမ္ဘာမှာမဆို ဖြစ်နိုင်တဲ့ မကောင်းတဲ့အရာပါ။ ယင်းသည် လက်တွေ့ကျသော မတူညီသောကမ္ဘာ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကို မဖြစ်စေသော ကမ္ဘာတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်သည်။ လူတွေရဲ့ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို တွေးကြည့်နိုင်ပေမယ့် မတူညီတဲ့ အကျင့်စာရိတ္တရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အကျင့်စာရိတ္တစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေကို လူတွေကန်းတဲ့ကမ္ဘာ (ဖန်တီးထားတဲ့ ဘုရားသခင်လည်း ဒါဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ) ကမ္ဘာ၏သဘောသဘာဝအရ မည်သည့်အတိုင်းအတာကိုမဆို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး မတူညီသည့်ကမ္ဘာတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤလောက၏ သဘောသဘာဝအရ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများသည် ၎င်းတို့ထံမှ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆင်းသက်လာပါသည် (ကျွန်ုပ်တို့ကို အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေခြင်း)။ ဤသည်မှာ Ramchal ၏ လူသိများသော ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်၊ "ကောင်းမှုပြုရန် ကောင်းသောသဘော" ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သဘာဝအားဖြင့် ကောင်းမှုပြုသင့်သည်။ သူ့မှာ တခြားရွေးစရာမရှိဘူး (အဲဒါက သူ့ကို အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတယ်)။
ဆိုလိုသည်မှာ "လူသတ်မှုသည် ဆိုးရွားသည်" ဟူသော အဆိုသည် ဆန့်ကျင်ဘက် ဥပဒေကဲ့သို့ပင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ဆက်စပ်မှုမရှိပါ (သို့သော် လိုအပ်သည်)။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်အပေါ် အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေခြင်း (သို့မဟုတ်- “အတင်းအကြပ်”) ဟူသော ယုတ္တိဗေဒအရ သူ့အပေါ် “အတင်းအကြပ်” ခိုင်းစေသကဲ့သို့ အထစ်အငေါ့မရှိပေ။ ဒါက ဥပမာ သဘာဝနိယာမနဲ့ မတူဘူး။ ဒြပ်ဆွဲအားနိယာမ၏ အဆိုကို နမူနာအဖြစ် ယူကြည့်ပါ- ဒြပ်ထုပါရှိသော အရာဝတ္ထုနှစ်ခုသည် ဒြပ်ထု၏ ထုတ်ကုန်နှင့် အချိုးကျပြီး ၎င်းတို့ကြားရှိ အကွာအဝေး၏ စတုရန်းနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသော တွန်းအားတစ်ခုဖြင့် ဆွဲဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော အရေးဆိုမှုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် မှားယွင်းနိုင်သည်။ ဆွဲငင်အားနိယာမ ကွဲပြားသည့် ကမ္ဘာတစ်ခု (ဥပမာ- တတိယအကွာအဝေးနှင့် အချိုးကျသော အင်အား)။ ထို့ကြောင့် ဤဥပဒေသည် ဘုရားသခင်ထံ အပ်နှံထားပြီး၊ သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်သာလျှင် ၎င်း၏အကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်သည်။
ယခင်ကော်လံတွင် ဘုရားသခင်မပါဘဲ မှန်ကန်သော အကျင့်စာရိတ္တမရှိဟု ကျွန်တော် စောဒကတက်ခဲ့သည်။ အကျင့်စာရိတ္တသည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ့ရှေ့တော်၌ အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေသည်ဟု ဤတွင် ကျွန်ုပ်၏အဆိုကို ဆန့်ကျင်သည်မဟုတ်ပေ၊ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်၏အလိုတော်မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဤနေရာတွင် ရှေ့တန်း ကွဲလွဲမှုများ ရှိနေသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးမှုတွင် Othhipron အကျပ်အတည်းကိုတင်ပြပြီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုမေးသော သင်တန်းနည်းပြ Jeremy Fogel ၏ ဆိုလိုရင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယခု ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။
ဆွေးနွေးမှုတွင် အကောင်းနှင့်အဆိုး၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ၎င်းတို့အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကို ပိုင်းခြားကြောင်း အကျဉ်းချုံးရှင်းပြခဲ့သည်။ အကောင်းနှင့်အဆိုး၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ဘုရားသခင်အပေါ် ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားနည်းဖြင့် မရနိုင်ပါ။ လူသတ်မှုက ကောင်းတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေကို ကူညီတာက မကောင်းဘူးလို့တောင် သူက မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ သို့သော် ကောင်းမှုပြုရန်နှင့် မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ကတိကဝတ်ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်မပါဘဲ မတည်ရှိပါ။ တစ်နည်းဆိုရသော် လူသတ်မှုကို တားမြစ်သည်ဟူသည့် စံနှုန်းဆိုသည်ကား၊ လူသတ်မှုတားမြစ်ခြင်း၏ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်နှင့် အကျုံးဝင်ကြောင်း ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အပေါ် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေခြင်း မရှိပါ။ ပညတ်တော်မှ ဆင်းသက်လာပြီး ကျင့်ကြံပြုမူသည်။
'ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်များ' ၏အယူအဆကိုပြန်သွားသောအခါ၊ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည် - David Enoch ကပြောသည်အတိုင်း၎င်းတို့သည်မိမိတို့ဘာသာတည်ရှိနိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်)၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်တည်ရှိပြီးအချို့တွင်ထည့်သွင်းထားလျှင်တောင်မှငါသည်သူ့ကိုဆန့်ကျင်ငြင်းခုံခဲ့သည်။ အတွေးအခေါ်လောကရဲ့ ထောင့်စွန်းက (ဒါဟာ) ငါ့အပေါ်မှာ ချည်နှောင်လို့ မရသေးဘူး (သင့်တယ်)။ ယခင်ကော်လံတွင် ကျွန်ုပ်သည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်များ (Enoch ဖြေကြားခဲ့သည့်) ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မည်သူဖန်တီးသနည်း နှင့် ၎င်းတို့အား တရားဝင်မှုပေးသူ (ကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းခဲ့သည့်) မေးခွန်းတို့အကြား ပိုင်းခြားထားသည်ကို ဖော်ပြပါမည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာမှာ ဘုရားသခင်သည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မဖန်တီးခဲ့သော်လည်း (၎င်းတို့ကို သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေခြင်း) သည် သူ၏အမိန့်တော်မှသာလျှင် ၎င်းတို့အား စည်းနှောင်အားကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အကျင့်စာရိတ္တတွင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် အဘယ်တာဝန်ရှိသနည်းဟု ယခုမေးပေမည်။ သူတော်ကောင်းဖြစ်လျှင်လည်း အကျင့်စာရိတ္တ (မိမိ၏ အမျိုးအစားအလိုက်) ကတိကဝတ်ပြုသင့်သည်။ ပညတ်တော်အားဖြင့် ချည်နှောင်ထားသလော။ ဒါက အရမ်းထူးဆန်းပြီး တကယ်တော့ ဒီ Dicto တရားဝင်မှုကို ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်စေမယ့် ပြင်ပအချက်တစ်ခု လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ ယခင်ကော်လံက ကျွန်တော့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်သည် အမှန်တကယ် အကျင့်စာရိတ္တအတွက် ကတိကဝတ်မပြုသော်လည်း ၎င်းကို ရွေးချယ်သည်ဟု ဆိုခြင်းသည် မှန်ကန်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဟူသည် မည်သည်ကိုမျှ မရွေးချယ်ဘဲ (၎င်းသည် သူ့လက်ထဲတွင်မရှိသော ပကတိနှင့် တင်းကျပ်သော ကိန်းဂဏာန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်) သို့သော် သူ၏ သတ္တဝါတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကို နှစ်သက်ရန်နှင့် တောင်းဆိုရန် ရွေးချယ်သည်။ ဤသည်မှာ Ari Alon ၏ယခင်ကော်လံတွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်၏ပြောဆိုချက်နှင့်ဆင်တူသည်၊ လူတစ်ဦးသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဟုတ်မဟုတ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဥပဒေပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဥပဒေများကိုဥပဒေပြုနိုင်သည် (ဘယ်အရာသည်အကောင်းနှင့်အဆိုးကိုသတ်မှတ်သည်) ။ သို့ဆိုလျှင် လူသားနှင့် ဘုရားသခင်သည် အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ နိယာမများဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားသည်။ အကောင်းနှင့်အဆိုး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ၎င်းတို့အပေါ်တွင် တွန်းအားပေးပြီး ၎င်းတို့အား မပေးပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် အကျင့်စာရိတ္တကို အမိန့်ပေးနိုင်သောကြောင့် ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် တွန်းအားပေးကာ၊ လူသားသည်လည်း ထိုသို့ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ယခု ပုံတွင် အခြားအဆင့်တစ်ခုကို ထပ်ထည့်ပါမည်။ သူအမြဲတည်ရှိနေသောကြောင့် ဘုရားသခင်အား ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (ကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်) ၏ ယာယီကြိုတင်ပြောဆိုရန် ခက်ခဲသည်။ သူ့ရှေ့မှာ အချိန်မရှိလို့ ဘာမှမရှိဘူး။ ဘုရားသခင်မရှိသော စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတစ်ခုပင် မရှိနိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့သော် သီအိုရီအရ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ရန် အမိန့်မပေးသော ကမ္ဘာတစ်ခု ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် (သူ၏ ကောင်းသောသဘောသဘာဝက သူ့အား ကောင်းမှုပြုရန် တွန်းအားပေးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မယူဆပါက)။ အကျင့်စာရိတ္တသည် မြင့်မြတ်သောအမိန့်တော်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်မဟုတ်ကြောင်း ယခုကျွန်ုပ်တို့သိရှိလာရကြောင်း သတိပြုပါ။ အဲဒါက ယာယီကြိုတင်ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ ရှေ့ကို သိသိသာသာကြီး ရှိနေတယ်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ကို အားမကိုးဘဲ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်မရှိလျှင်ပင် ကိုယ်ကျင့်တရားရှိနေသည်ဟု ဆိုခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် လိုအပ်သော တည်ရှိမှု ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်း (ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဘုရားသခင်အကြောင်း ပြောနေသည်၊ ယခင်ကော်လံမှ "ပိန်သော" မဟုတ်ဘဲ) ဖြစ်သည်ဟု ယူဆလျှင် လိုအပ်သော တည်ရှိမှုဟူသော အဖြစ်မှန်ကို ပြောဆိုရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အကျင့်စာရိတ္တ (သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်များ) သည် ပညတ်တရားမပါဘဲ တည်ရှိနေလျှင်ပင် ဘုရားသခင်မပါဘဲ တည်ရှိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ နှစ်ခုလုံးသည် ပြိုင်တူတည်ရှိနေသော်လည်း၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်များသည် ဘုရားသခင်အပေါ် လုံးဝအားမကိုးသေးပါ။
ယခုမူကား ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းငယ်ကွဲပြားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပေသည်- ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ဘုရားအတ္တ၏ အရိုးတစ်ခု (အမှန်အားဖြင့် "ကောင်းမှုပြုရန် ကောင်းသောသဘော" ဖြစ်သည်)၊ ၎င်းတို့သည် တည်ရှိနေသကဲ့သို့ တည်ရှိနေသကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းတို့သည် အမြဲတမ်း လိုအပ်ပြီး အမြဲတည်ရှိနေပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ တရားဝင်မှုမှာ အမြဲတမ်းလည်း မလိုအပ်ပေ။ သူတို့မှာ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အမိန့်မပေးဘဲ စည်းနှောင်ထားတဲ့ အင်အားမရှိဘူး။
ဘုရားသခင်နှင့် အာရှာအမှုဆောင်ကြားတွင် အလုပ်မဖြစ်ပါ။
ကော်လံအဖွင့်တွင် ဤကော်လံတွင် ဆွေးနွေးထားသော ဘုရားသခင်၏ အယူအဆသည် ယခင်ကော်လံမှ "ပျော့ပျောင်းသော" ဘုရားသခင်မဟုတ်ကြောင်း (ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တရားဝင်စေရန် လိုအပ်သည်) ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ၎င်း၏ စွမ်းအား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး ကောင်းမှုပြုခြင်းသည် သဘာဝဖြစ်သည်ဟူသော အချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤနေရာ၌ ထွက်ပေါ်လာသော အကြံပြုချက် အမျိုးမျိုးကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ ဤအရာကို သင်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မည်။ နှင့် ပို. ဤအရာများအားလုံးသည် ယခင်ကော်လံတွင် ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော "ပိန်" နှင့် အနည်းငယ် "အဆီ" အနည်းငယ် "အဆီ" ဖြစ်စေသော ပေါင်းထည့်မှုများဖြစ်သည်။
အကြောင်းမှာ ဤကော်လံတွင် ဆွေးနွေးမှုသည် မက်တာကျင့်ဝတ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်၊ တကယ်တော့၊ Othhipron အကျပ်ရိုက်မှုကိုယ်တိုင်က သီအိုရီနယ်ပယ်နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဓမ္မပညာမရှိလျှင် အကျင့်စာရိတ္တနိယာမများကို ဘုရားသခင်က သတ်မှတ်သည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ ပြဿနာမဟုတ်ပေ (သူတော်ကောင်းဟူသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မဟုတ်ဟု ယူဆရန် မလိုအပ်သောကြောင့်) အကျပ်အတည်းဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ဒဿနဆိုင်ရာရေတွက်မှုတွင်လည်း ယခင်ကော်လံရှိ ကျွန်ုပ်၏စကားများနှင့် ကွဲလွဲမှုမရှိပါ။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည် အကောင်းနှင့်အဆိုး (ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်များ) ကို သတ်မှတ်ပေးမည်ဆိုလျှင် ၎င်းသည် ယခင်ကော်လံတွင် ကျွန်ုပ်တင်ပြခဲ့သည့်အရာများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ဤကော်လံတစ်ခုလုံးအတွက် မလိုအပ်ပါ။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူတော်ကောင်းဟု ယူဆချက်ဖြစ်သည့် ဓမ္မဗေဒဆိုင်ရာ (ဂျူး-ခရစ်ယာန်) လေယာဉ်၏ ဘုရားသခင်နှင့် ယခင်ကော်လံမှ ကျွန်ုပ်၏ meta-ethical အရေးဆိုချက်ကို ညှိနှိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဓမ္မရေးရာ ဆွေးနွေးချက် (နှင့် ဖောက်ပြန်သော ကျင့်ဝတ်တစ်ခု မဟုတ်)။
ဘာသာရေးတန်ဖိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ Othipron အကျပ်ရိုက်သည်။
ဘာသာရေးတန်ဖိုးများနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကြား ခြားနားချက်ကို ကျွန်ုပ်အကြိမ်ကြိမ် ထောက်ပြခဲ့သည် (ဥပမာ ကော်လံကိုကြည့်ပါ၊ 15ငါ့စာအုပ်၏အစ မတ်တပ်ရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်တယ်။ ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ)။ ဟာလခဟ်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ ကွဲလွဲမှုများကို ကျွန်ုပ်တင်ပြသော အဖြေမှာ ၎င်းတို့သည် လွတ်လပ်သော တန်ဖိုးစနစ်နှစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်တွင် တည်ရှိသည်။ Act X သည် ဟာလာချီကျူးလွန်နိုင်သည် (၎င်းသည် ဘာသာရေးတန်ဖိုး A ကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်) သို့သော် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားအရတားမြစ်ထားသည် (၎င်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုး B ကို ထိခိုက်စေသောကြောင့်)။ ဘာသာရေးတန်ဖိုးများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပဋိပက္ခအခြေအနေတွင်သာ ရပ်တည်နိုင်သည် (အချို့သောအခြေအနေများတွင်သာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့်အခါ)။ ကျွန်ုပ်၏ ငြင်းခုံမှုသည် ထိုကဲ့သို့သော ကွဲလွဲမှုများကို အဟန့်အတားမရှိပါ၊ အမှန်မှာ ယင်းတို့သည် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုများမဟုတ်ကြောင်း (ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် သီအိုရီအဆင့်တွင် အခက်အခဲမရှိ) ကွဲလွဲမှုများ (ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်) ဟု ဆိုခြင်းသည် ပိုမှန်ပါသည်။ လက်တွေ့အဆင့်တွင် လုပ်ပါ။)
ယင်းနောက် Tirgitz သည် အောက်ပါမေးခွန်းကို မေးခဲ့သည် (ခစကားပြန် ယခင်ကော်လံသို့):
ဆိုလိုသည်မှာ လာမည့်ကော်လံတွင် သင်သည် ဘာသာရေးတန်ဖိုးများနှင့် အခြားတန်ဖိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ euphron ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး Gd သည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖယ်ရှားရန် သင့်ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြင့် တန်ဖိုးများဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဒါက ဘုရားသခင်တောင်မှ သူ့ကိုယ်သူ နိုင်ထက်စီးနင်း မဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူးလို့ ထင်ထင်ရှားရှား ဆိုလိုပါတယ်။
သူ့မေးခွန်းကို ငါရှင်းပြမယ်။ ကျွန်ုပ်၏နည်းလမ်းအရ၊ ဘာသာရေးတန်ဖိုးများမြှင့်တင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆန့်ကျင်သောသီလရှိရန် ဘုရားသခင်မိန့်မှာထားသည်။ သို့ဆိုလျှင်၊ Tirgitz က ဘာသာရေးတန်ဖိုးများသည် သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးခံရသည်ဟု ထင်ကာ သူ၏ထင်သလိုဆန္ဒ (သူ့၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဥပဒေပြုခြင်း) ၏ရလဒ်မဟုတ်ဟု ငြင်းဆိုသည်။ အကယ်၍ ပညတ်တော်များသည် ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားသော “ဟာလခိခ်ဖြစ်ရပ်များ” မဟုတ်သော်လည်း၊ သူ၏ဥပဒေပြုချက်ဖြင့် ဖန်ဆင်းခံရပါက၊ ၎င်းတို့ကို ကွဲပြားစွာ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သူလိုချင်တာ (အမွေဆက်ခံသူ) ကောင်းစေချင်ရင် အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြဋ္ဌာန်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခများတည်ရှိနေခြင်းက ဟာလခဟ်၏ဥပဒေများ (သို့မဟုတ် ဟာလခဟ်၏တူညီသောဥပဒေများကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ဘာသာရေးတန်ဖိုးများ) ကိုလည်း Gd တွင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောကြောင့် ဤပဋိပက္ခများအတွက်မလိုအပ်ဘဲဖမ်းဆီးခြင်း (သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အား အနိုင်ကျင့်ခြင်း) ကို ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါက အရမ်းကောင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပြီး သူပြောတာမှန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များ ရှိသကဲ့သို့ Halakhic အဖြစ်မှန်များလည်း ရှိပါသည်။ ဤအရာများနှင့် ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ကို အားမကိုးဘဲ သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေကြသည်။ သုံးပုံသုံးပုံသုံးအုပ်၏အစတွင် ကတိကဝတ်ပြုခြင်းကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ကတိကဝတ်ပြုခြင်းကို ပူဇော်သော ဟလက္ခရုပ်နှင့် အမျိုးအစားအလိုက် အရိုအသေပြုခြင်းကဲ့သို့ သီလကျင့်ခြင်း၏ Kantian ရုပ်ပုံနှင့် ယှဉ်ကြည့်တော့မည်။ ဤဥပမာသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား အစောပိုင်းရက်အနည်းငယ်က မေးခဲ့သည့် Tirgitz မှ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုဆီသို့ ရောက်စေသည် (စာတွဲတွင် လှည့်ပတ်ဆွေးနွေးမှုကို ကြည့်ပါ ဒီမှာ) ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုတွင် တန်ဖိုးများကြားတွင် ကွဲလွဲနေသည့် အခြေအနေများတွင် X လုပ်ပြီး Y ကိုကျော်သွားလျှင်ပင် Y ကို ကျော်သွားသည့် ပြဿနာတစ်ခု ရှိသေးသည်။ ဝမ်းနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းနည်းမှုကို ခံစားသင့်သည် လူတစ်ဦးကို နာကျင်စေခြင်း သို့မဟုတ် အကျင့်ပျက်မှုတစ်ခုခုကို ငါလုပ်ရလျှင်ပင်၊ Tirgitz သည် ထိုဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုသည် halakhic context တွင် ပေါ်လာသင့်သလား (မေး။)ပြောသည်: "ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ ငါ့အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်း")။ ဆိုလိုသည်မှာ ငါသည် မိတ်ဇဝသ်၌ စေ့စပ်ခြင်းကြောင့် ငါသည် lulav ကို မလှုပ်ဘဲ (သို့မဟုတ် ငါနေမကောင်းသောကြောင့် Yom Kippur ၌ အစာမရှောင်ဘဲ) သတ်ပစ်ခဲ့ရသည့်အတွက် နောင်တရသကဲ့သို့၊ လူများ (တခါတရံ အရပ်သားများလည်း)။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ဤကိစ္စတွင် ဟာလဟာဟ်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ကွာခြားမှုရှိမရှိကို သူ၏မေးခွန်းဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာတွေကြား ခြားနားချက် ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ အဲဒီ့မှာ ပြန်ပြောခဲ့တယ်- ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုမှာ အခြားတန်ဖိုးတစ်ခုရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ တန်ဖိုးအချို့ကို ပယ်ချခံရရင်တောင် ငြင်းပယ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကို ကျော်သွားတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းမှု ဒါမှမဟုတ် ကွဲလွဲမှုတွေ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် (လူတစ်ဦးကို နာကျင်စေခဲ့တယ်)၊ . တစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဟလခ၌ တာဝန်မရှိ၊ ကျွန်ုပ်၌ အကျုံးဝင်သော အရာကို ငါပြုခဲ့လျှင် ငါမပြည့်စုံသေးသော အရာကို နောင်တရစရာ အကြောင်းမရှိပေ။ လုံးဝခွင့်ပြုထားပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ထိခိုက်မှုမရှိပါ။
သို့သော် ဤခြားနားချက်မှာ ဟလာကဟ်တွင် ပညတ်တစ်ခုသာရှိပြီး ပညတ်မရှိသည့်အခါ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဟု ယူဆသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပုံရိပ်ကို ကြည့်ရင် ဒီထူးခြားချက်ကနေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်ဖို့ လိုနေပုံရတယ်။ ဟလာခဟ်အမိန့်တော်သည် ဘာသာရေးတန်ဖိုးများ မြှင့်တင်လာသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါက၊ ကျွန်ုပ်သည် ဟာလခဟ်ကို တရားမျှတစွာ ချိုးဖေါက်ခဲ့လျှင်ပင် (၎င်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့သော ဟလခဟ်တစ်ခုကြောင့်) ဝိညာဉ်လောက၌ တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်ပျက်စီးနေသေးသည် (ငါသည် ဟလာခဟ်အမှန်တရားကို ဆန့်ကျင်၍လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာခဲ့တယ်။) ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တင်ပြသောပုံသည် ဤကိစ္စတွင် ဟာလဟာဟ်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တတို့အကြား အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုမရှိသည်ကို ပြသနေပုံရသည်။
သီအိုရီအရ တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေကိုလည်း ရှောင်ရှားနိုင်တယ်လို့ ထပ်လောင်းယူဆနိုင်ပေမယ့် (ကြည့်ပါ၊ ဆောင်းပါးများ ပသခါပွဲနေ့တွင် citric အက်ဆစ်ကို ကျွန်ုပ်ယူဆောင်လာပါသည်။) တရားတော်ကို သစ္စာစောင့်သိသော ငါကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်သော သူသည် အပျက်အစီးမရှိစေရန် တန်ခိုးပြာဋိဟာကို လုပ်ဆောင်ပြီး ပျက်စီးမှုကို တားဆီးသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ သီလအပါယ်၌ မဖြစ်ပေါ်ပေ။ ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးကို ထိခိုက်စေခဲ့ရင်တောင် ပျက်စီးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ခြားနားချက်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများတွင် ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် halakhic context တွင် ၎င်းတို့သည် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ရုပ်လောကကို အနှောင့်အယှက်မပေးသောကြောင့် ရူပဗေဒကို မပြောင်းလဲဘဲ ဝိညာဏဖြစ်ရပ်မှန်များကို ပြောင်းလဲတော်မူသည် (ဝိညာဏလောက၌ စွက်ဖက်သောကြောင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်)၊. ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များ မဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (ဥပမာ လူတစ်ဦးကို ထိခိုက်နစ်နာစေသော သို့မဟုတ် ဒုက္ခပေးခြင်း) ပေါ်တွင် မူတည်နေကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသက်ကိုကယ်တင်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးထံမှ ပိုက်ဆံခိုးယူပါက ခွင့်ပြုထားသော်လည်း၊ မိတ္တူပင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း သူခိုး၏ပျက်စီးမှုသည် နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိပါ (ဤတွင် ဘုရားသခင်သည် အံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပိုက်ဆံကို သူ့ဆီ ပြန်ပေးမယ်။)
အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်မရှိသော်လည်း X ကို မပြုလုပ်ရဟု အမျိုးအစားခွဲသည့်အမိန့်က ကျွန်ုပ်အား ပြောထားသည့် ယခင်ကော်လံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရပ်များအတွက် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ပစ္စည်းကို အခြားတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ ငြင်းပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် နောင်တရစရာမရှိပါဘူး။ ၎င်းသည် halakhic စက်လုံးရှိ အခြေအနေနှင့် ဆင်တူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူတစ်ဦး၏အသက်ကို ကယ်တင်ရန် NIS အခွန်တစ်ထောင် တိုးမည်ဆိုပါစို့။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် အခွန်ရှောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိပါ (ယခင်ကော်လံတွင် ဤအရာကို ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သည်)။ မရှိသော ပြဿနာ၏ ရလဒ်ကို ကျော်လွန်၍ ဤနေရာတွင် ဤအရာသည် အမျိုးအစားအလိုက် ဖောက်ပြန်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဤအခြေအနေမျိုးတွင် ဤအရာသည် မှန်ကန်ပါသည်။ အမှန်မှာ၊ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်သည် အမျိုးအမည်ခွဲသည့်အမိန့်ကို လုံးဝချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဟု ဆိုခြင်းသည် ပိုမှန်ပါသည်။ ယေဘူယျဥပဒေမှာ လူတိုင်း အသက်ချမ်းသာဖို့အတွက် အခွန်ရှောင်သင့်တယ်။
 ယခင်ကော်လံတွင် ကျွန်ုပ်သည် ယုတ္တိဗေဒ-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ အရေးဆိုမှုအဖြစ် ဆန့်ကျင်ဘက်ဥပဒေသည် အဘယ်ကြောင့် မျှတမှုမလိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားသော ရှုထောင့်မှ တူညီသော အယူအဆဖြစ်သည်။
 ဘုရားသခင်သည် ကျည်ဆံအားလုံးကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး နံရံအားလုံးကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော ကျည်ဆန်တစ်ခုကိုလည်း ဘုရားသခင် ဖန်တီးနိုင်မလား။ ၎င်းအတွက် အဖြေမှာ အနုတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ သူဖန်တီးထားသော ဘောလုံးသည် နံရံများအားလုံးကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပါက ၎င်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော နံရံမရှိသောကြောင့်၊ ထို့ကြောင့် ဘောလုံးအားလုံးကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော တံတိုင်းလည်း မရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်ဖန်တီးရန် ဘုရားသခင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် သူ၏စွမ်းရည်ကို မထိခိုက်စေပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ယုတ္တိအဆင့်တွင် ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ်မှန် မရှိပါ။ ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ ဂယက်ရိုက်သော ကျောက်တုံးကြီးသည် ဘုရားသခင် မမြှောက်နိုင် နှင့်ဒီမှာ သဘာဝမကောင်းမှုဆိုင်ရာမေးခွန်း (ဒသမအခန်းရှိ ကျွန်ုပ်၏ trilogy ရှိ ဒုတိယစာအုပ်ကိုလည်း ကြည့်ပါ)။
 နိဂုံးချုပ်ရသော် သူ၏ကောင်းမှု (လေချွန်သံ) သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မတူပါ။ သူ့တွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဥ်းဥပဒေများ မပါရှိသော်လည်း ခိုင်လုံမှုပေးသော သူဖြစ်သည်။ လူသည် သူ့အား တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးထားသည့် အမျိုးအစားအလိုက် အမိန့်ဖြင့် ချည်နှောင်ထားပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကတိကဝတ်မပြုဘဲ ၎င်းကို တရားဝင်မှုပေးရန် ရွေးချယ်သည်။ Ramchal က သူ့သဘောသဘာဝက ကောင်းတာကို လုပ်တယ်လို့ ပြောလိမ့်မယ်။
 ကော်လံတစ်ခုရဲ့အစမှာ 278 nehma dhakisufa ရဲ့ သဘောတရားကို ကျွန်တော် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီ၊ အဲဒီမှာ ဆွေးနွေးတာက ဒီမေးခွန်းကိုလည်း အဖြေပေးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
 halakhah နှင့် အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ ယှဉ်တွဲဖော်ပြသည့် အမျိုးအစားအလိုက် အစီအစဥ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ၊ သို့သော် ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ၎င်းသည် အကြောင်းအရာနှင့် ယုတ္တိရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံကို မသက်ဆိုင်ပါ။ အဲဒီမှာ အမျိုးအစားအလိုက် အစီအစဥ်မှာ halakhic status ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် ငြင်းခုံပါတယ်။
 ဤနေရာတွင် မီးတောက်ရန် လိုအပ်ဆဲဖြစ်သော ကနဦး အတွေးတစ်ခု တင်ပြပါမည်။ အားလုံးပြီးရင် ကွာခြားချက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အခြေအနေတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကို ကတိကဝတ်များ ထားရှိသော်လည်း ဟလာကဟ်တွင် ဘာသာရေးတန်ဖိုးများကို ကတိကဝတ်ပြုခြင်း နှင့် မြင့်မြတ်သောအမိန့်ကို နာခံရန် တာဝန် (သာသနာ့တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ ) ဤနေရာတွင် ယူဆချက်မှာ အကျင့်စာရိတ္တ၌ မြင့်မြတ်သော ပညတ်တော်မရှိသော်လည်း ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုမူသော ဘုရားအလိုတော်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ categorical order တွင် halakhah ၏ မူဘောင်အတွင်း mitzvah ၏ အဆင့်အတန်း မပါဝင်ပါ (ကျွန်ုပ်က ၎င်းတွင် halakhic အဆင့်ရှိသည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ ဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ).
ငါဖျားနေလို့ Yom Kippur မှာ အစာမရှောင်တဲ့အခါ ပညတ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာက တကယ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ပညတ်က အစာမစားရလို့ အစာမစားရဆိုတဲ့ ပညတ်က နောက်ဆက်တွဲပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီစားသောက်မှုကနေ ထိခိုက်မှုမရှိသလို နောင်တရစရာလည်း မရှိပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်၊ အချို့သောတန်ဖိုးများကို မှန်ကန်စွာ ပယ်ချခံရသော်လည်း၊ ၎င်းကို ထိန်းသိမ်းရန် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားသည် တူညီနေမည် (၎င်းကို နာခံ၍မရပါ။ အမှန်စင်စစ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများတွင် အမြဲတမ်း ငြင်းဆိုထားသည်ကို ငါငြင်းဆိုပါသည်။ နှင့် 'ခွင့်မပြု')။ ဟာလက္ခ၌မူကား (အကုသိုလ်တရားတို့မှ ပြုပြင်၍ ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤတရားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ရှုမြင်ပုံနှင့် ဆင်တူပုံရသည်။ ၎င်းသည် de Dicto တည်ရှိမှုနှင့် de re တည်ရှိမှုအကြား ခြားနားချက်နှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။
bတွင်မှတ်စုကြည့်ပါ။ဆောင်းပါးများ Chapter D ရှိ Halacha ၏ ဒဏ်ခတ်မှုတွင်၊ ကောင်းကင်၏ ပြစ်ဒဏ်များတွင် စက်ယန္တရား ချဉ်းကပ်မှုများကို ဆန့်ကျင်၍ ထွက်လာပါသည်။
"ဖန်ဆင်းရှင်ကို ဖန်ဆင်းသူ" အယူခံအတွက် အဖြေ
80 "စကားစစ်ထိုးပွဲ၏အလင်းတွင် Othhipron အကျပ်ရိုက်မှုကိုကြည့်ပါ (ကော်လံ 457)" ဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်များ
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 တွင် ၁၅:၀၄
Yom Kippur တွင် အစာရှောင်ခြင်းမှ တားမြစ်ခံရခြင်းအတွက် သားဖွားဆရာမတစ်ဦး ဝမ်းနည်းမိသည်။ ပညတ်တော်၌ အလုံးစုံ အကျုံးဝင်သည်- ကင်းလွတ်၏။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဝိညာဉ်နှင့် စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကြီးကြပ်ရန် ပညတ်တော်သည် ပို၍ကြီးမားသည်။ အစာရှောင်ခြင်းမပြုသောကြောင့် ယခုအချိန်တွင် မိဇဝတရားသည် စားရမည်ကို ကောင်းစွာသိသော်လည်း ဝမ်းနည်းပါသည်။ အစာရှောင်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းနှင့် အပြစ်ဖြေခြင်းနေ့ရက် ကင်းမဲ့သည်။ ဤခံစားချက်များကို Afra Daraa အဖြစ် ပယ်ချပြီး 'စိတ်ပညာ' ၏ အကြောင်းအရင်းဖြင့် ၎င်းကို ပယ်မည်လား - သင်မစဉ်းစားထားသော အကြောင်းပြချက်များ။ သို့မဟုတ် ဤနေရာတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု၏ ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်တူသော အခြားပစ္စည်းတစ်ခု ရှိပါသလား။
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 တွင် ၁၇:၀၁
ဒီဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို ကျွန်တော် အပြည့်အဝနားလည်ပြီး သူ့မှာ နေရာတစ်ခုရှိမယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အရာမှာ နောင်တရရန် စိတ်ဝင်တစား ရှိ/မရှိ (ဟလာခစ်မဟုတ်ပါ) မေးခွန်းဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်ထက် စံနှုန်းဖြင့် ဆက်ဆံနေပါသည်။ တကယ်လို့ လူတွေက ဘောလုံးပွဲပျက်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်၊ မင်းက တည်းခိုခန်းမှူးအနေနဲ့ ဘုန်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလား။
ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုး ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့တန်ဖိုးကို မမြင်ဘဲနဲ့ ဝမ်းနည်းမှုကို နားလည်သလားလို့ မမေးခဲ့ပါဘူး။ ဘောလုံးပွဲတွေကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူး။
အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကော်လံမှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း Gd က တစ်စုံတစ်ယောက်က တရားဥပဒေနဲ့အညီ ပြုမူရင် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို တားဆီးတယ်လို့ ယူဆရင် ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ ဆုံးရှုံးခြင်း (အတွေ့အကြုံ ဆုံးရှုံးခြင်း) နောင်တရလျှင် - ဤသည်မှာ အမှန်ပင် သူ့အခွင့်အရေးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် သေချာပေါက် တန်ဖိုးမရှိပါ။ ဝမ်းနည်းခြင်းက သူ့အတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ပြသတဲ့အတွက် Yarosh တစ်မျိုးကို ဖော်ပြဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဝမ်းနည်းမှုသည် သူ့အတွက် တန်ဖိုးရှိသည်ဟူသော စကားရပ်ထက် ကျော်လွန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်မှာ အပြစ်မရှိဟု ဆိုထားသည်။ Halakhic context မှာ ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အများစုမှာ အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားကြသည်။
အကျင့်စာရိတ္တက သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေတယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်က အထောက်အထားမရှိဘူးထင်ပါတယ်။
ဤမေးခွန်းများသည် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အမိန့်ကို အထွတ်အမြတ်ထားရာ နိယာမအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟုသာ ယူဆကြပြီး ထို့ကြောင့် သူသည် မိမိကိုယ်ကို မည်သို့ ဆန့်ကျင်နိုင်သနည်းဟု မေးပါ။
ချွန်စက် - မေးခွန်းသည် ရှင်းလင်းပြီး ကွဲလွဲမှုမရှိပါ။ အကျင့်စာရိတ္တသည် ဝမ်းကရွေးချယ်သော ပဓာနနိယာမဖြစ်သည်ဟု သူမယူဆသောကြောင့် ဤအတွက် ကျင့်ဝတ်တရားမျှတမှုရှိကြောင်း သူမအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရသည်။
တိုက်မိတယ်လို့ မထင်မိဘူး။ ထို့အပြင်၊ သူမကောင်းလျှင် Motivation သည်အရေးမကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ တေးသွားကို သင် လွဲချော်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်- အဲဒါတွေကို ယုတ္တိမဲ့မေးခွန်းတွေ (၎င်းရဲ့ ဆက်စပ်မှုအကြောင်း) ကို တင်ပြထားပေမယ့် ဒီမေးခွန်းတွေက ကျင့်ဝတ်ပါ။ သားတော်အား နာခံရန် အမိန့်ပေးသော အာဗြဟံသည် ဣဇာက်အား အမျိုးအနွယ်ဟု ခေါ်မည်ဟု ကတိပေးသော ဂေါ်ဒ၏ ညီညွတ်မှုကိုသာ အံ့ဩနေသကဲ့သို့ပင်၊ သင့်အတွက် ဤမေးခွန်းနှစ်ခုသည် အလားတူ ယုတ္တိကျသော မေးခွန်းများဖြစ်သည်။ ကဗျာဆရာတွေ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
Tirgitz ၏မေးခွန်းအတွက် - Halacha သည်ကိုယ်ကျင့်တရားတာဝန်များနှင့်ကွဲပြားသည် (Maimonides သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အသံကြားခြင်းဆိုင်ရာပညတ်တော်များအကြားခွဲခြားထားသကဲ့သို့) ကြောင့်၎င်းသည်တကယ်ကောင်းသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကို ရှင်းပြရန်တစ်နည်းမှာ Gd သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ သမ္ပတ္တိမရှိသော နာမ်အစုတစ်ခု၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သည်- ထို့နောက် မေးခွန်းသည်လည်း သဘာဝအတိုင်း မေးလိမ့်မည်- Gd သည် ဤကဲ့သို့သော များပြားလှသော ပညတ်တရားများကို လိုက်နာပါက၊ ဤတရားအစုသည် ထင်ရှားစွာပင်၊ Spinoza God သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ဘာမှမထူးခြားသော်လည်း "သဘာဝ" မဟုတ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာတွင် မြင့်မြတ်သောသတ္တဝါဖြစ်သည်။ မင်းရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်း (သူတို့က "ဥပဒေများ" မဟုတ်ဘူး)၊ ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့ လက်အောက်ခံဥပဒေတွေအပေါ် မေးခွန်းထုတ်တာက ယုတ္တိဗေဒအရ မရှိမဖြစ်အတွက် အလွန်အားနည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်ငြင်းခုံခဲ့သည်မှာ အနည်းငယ် ကျဉ်းမြောင်းသော်လည်း ကျွန်ုပ်လက်ခံနိုင်သော တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကြောင့် - ၎င်းတို့သည် တူညီသောနည်းဖြင့် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒါပေမယ့် halakhic ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ရင် လက်ခံဖို့ နည်းနည်းခက်တယ် လို့ ကျွန်တော့်အမြင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက် ဟာ သူတို့ လိုအပ် သလို ထင်ရတဲ့ ကမ္ဘာ ကြီး ကို ဖန်တီး ခြင်း ပါ၀င် ပြီး မလိုအပ် ဘူးလို့ ထင် ပါတယ် ( အငြင်းအခုံ ကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေ အမြင့်ဆုံး အဆင့် မှာ လိုအပ် ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို နားလည် ဖို့ မဖြစ်နိုင်သေး ပါဘူး - အရေးကြီး တဲ့ အရေးတကြီး ပါပဲ ၊ ကမ္ဘာကြီးကို ဒီဥပဒေတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားရင် ဖိနှိပ်ဖို့ ခက်ပါတယ်)။ ဤသည်မှာ အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ နိယာမတရားများပင်ဖြစ်သည် (““နာခြင်းသည် မကောင်း” ဟူသည် ဝေဒနာရှိသော လောကနှင့်သာ သက်ဆိုင်သော အဆိုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်၊ ကြီးမားသောမေးခွန်းမှာ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့် ဤလောက၌ ဝေဒနာကို ဖန်ဆင်းသနည်း၊ နာကျင်မှုကို မဖြစ်စေသင့်ပါဘူး) ဒါပေမယ့် စည်းမျဉ်းတွေက ပိုထင်သလိုထင်သလိုထင်ရတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ငါသွားခဲ့တာက ပိုအားကောင်းပုံရတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့ရှေ့တွင်ရှိပြီး သူ့အပေါ် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသော ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် နေရာပေးထားသည်။ စကားမစပ်၊ ဒီမေးခွန်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ သီအိုရီအရ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိသေးတယ်၊ ငါဘာတွေတွေးနေမှန်းမသိဘူး - Gd က လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး သူရွေးချယ်နိုင်တယ်၊ ဤဥပဒေများသည် အခြားတန်ဖိုးများနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ငြင်းပယ်ခံရသော ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အရာဖြစ်နိုင်ပြီး သူ၏ရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးမရှိဘဲ၊ ဤဥပဒေများကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန် ခဲယဉ်းသဖြင့် ၎င်းတို့သည် မိမိကိုယ်ကို သက်သေပြနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (Maimonides က ဗဟုသုတသစ်ပင်နှင့် doc အကြောင်း ရေးသားသကဲ့သို့)။ ဤဖြစ်နိုင်ခြေအရ - ကိုယ်ကျင့်တရား၏နိယာမများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော halakhic ကမ္ဘာတစ်ခုတည်ရှိခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မလိုအပ်ဘဲ၊ ပြင်ပအကြောင်းပြချက်ကြောင့် တရားမျှတပြီး ဘုရားသခင်လက်အောက်ခံရမည့် စည်းမျဉ်းလောကတစ်ခုလုံးကို မလိုအပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဤကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပုံရသည်။
ကျွန်တော်ပြောတာကို နားမလည်ဘူး။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်မှာ အချက်နှစ်ချက်သာ မှတ်ချက်ပေးမှာပါ (နားလည်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်)
1. ဥပဒေများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အကောင်းနှင့်အဆိုး၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ သေချာပေါက်မရှိသော်လည်း အမှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ထက် မြင့်မြတ်သည်ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောစရာမရှိပါ။
၂။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဥပဒေများပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာတွင်သာ ဥပဒေများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သတ္တဝါများနှင့် လုံးဝခြားနားသော အခြားကမ္ဘာတစ်ခုကို ဖန်ဆင်းခဲ့မည်ဆိုလျှင် (သူတို့၌ ဝမ်းနည်းမှု နှင့် ဒုက္ခမရှိပါ)၊ အခြားသော နိယာမတရားများသည် ယင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက ကိုယ်ကျင့်တရားဥပဒေတွေဆိုရင် အဲဒါတွေက ငါတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဥပဒေသတွေကို အဲဒီအခြေအနေတွေနဲ့ အသုံးချနေတာ။ ဤသည်မှာ ဟာလခဟ်အကြောင်း သင်ဖော်ပြခဲ့သော အတိအကျဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကွာခြားပုံမပေါ်ပါ။
သူ့သားတွေက Yitzhak Koren ပါ။
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 တွင် ၁၇:၀၁
“အမျိုးအစား၏အထောက်အထားတောင်းဆိုမှုတိုင်း-aသည်bဖြစ်သည်။ ဤပြောဆိုချက်သည် မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆပါက၊ အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာais a, အဓိပ္ပါယ်မှာ အချည်းနှီးသော တင်းတိမ်မှုပညာကို ဆိုလိုသည်။” - ဒီမှာ ပြဿနာရှာရတာ ခက်တယ်။ ဤတောင်းဆိုမှုသည် မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆပါက A=A ကို တောင်းဆိုခြင်းနှင့် ယုတ္တိနည်းအရ ညီမျှသည်၊ 1 + 1 =2နှင့် အခြားမှန်ကန်သော အရေးဆိုမှုများအတွက်လည်း တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဝါကျ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် ၎င်းကို ပေါင်းထည့်ထားသည့် အချက်အလက်ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းဝါကျသည် "အမှန်ဟု ယူဆခြင်း" ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ အမှန်ဟု ယူဆပါက၊ မှန်သည်ဟု ထပ်မံပြောခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ အချက်အလက်များကို ထည့်မတွက်သောကြောင့် သိသာထင်ရှားမည်မဟုတ်ပေ။
တစ်နည်းဆိုရသော် သူသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး သွန်သင်ခြင်းမပြုပါ။
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/23 တွင် ၁၇:၀၁
လှပသော Uthron အကျပ်ရိုက်မှုသည် အကျင့်စာရိတ္တနှင့် မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ မရှင်းလင်းသော ရုပ်တုများအတွက်ဖြစ်သည်။ ယင်းအစား၊ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များအရ ၎င်းတို့သည် မနာလိုမှုနှင့် စွမ်းအားများ ပြည့်နှက်နေကြောင်း ထင်ရှားသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရား၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမြတ်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သူသည် အကျင့်စာရိတ္တနှင့် အမှန်တရားကို 'ဘာသာရပ်' မဟုတ်ပါ။ သူသည် သူတို့၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဖြူစင်သော သမ္မာတရားနှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာသည် သေးငယ်သောအမှုန်အမွှားအဖြစ် ဖန်တီးသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအားဖြင့် အနည်းငယ်သိသည်၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာသည် အလုံးစုံသောလောကကိုဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင်သိပြီး ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို သူသာလျှင်သိသည့် ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံမှ ကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာသည် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
ဖန်ဆင်းရှင်၏နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအခက်အခဲများသည် ဖခင်ဖြစ်သူအား လျှပ်စစ်ပလပ်ပေါက်တွင် သံတူဖြင့်တုတ်ရန်ကြိုးစားစဉ် အဘယ့်ကြောင့် လက်ကိုရိုက်သည်ကို နားမလည်သောကလေး၏အခက်အခဲနှင့်တူပြီး ဖခင်ထံသို့ အဘယ်ကြောင့်လွှဲပြောင်းရကြောင်းကိုလည်း နားမလည်ပေ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ကျောက်စရစ်ခဲဖြူဖြူများသည် ၎င်းတို့၏ဓားများကို ဆွဲထုတ်ကာ ကံဆိုးသူ၏အသားကို ကိုက်ဖြတ်ကြသည်။
လူ့မိဘတွေ အနေနဲ့ကတော့ လက်နဲ့ထိုးနှက်တာက ကလေးကို ဓာတ်လိုက်ခြင်းကနေ ကယ်တင်ဖို့ လာပြီး 'သင်္ကန်းဖြူ ဓားဆွဲစက်' တွေက ကလေးကို အသက်ကယ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု လုပ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ခွင့်ရပြီးသားပါ။ လူသားတွေကို နှစ်ရာနဲ့ချီပြီး သုတေသနလုပ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အတိုင်းပဲ၊ သူတို့ရဲ့ နက်နဲမှုလေးတွေကို နားလည်အောင်၊ ငါတို့က ဖန်ဆင်းရှင်ကို 'အကြွေး' တစ်ချို့ကို ပေးခွင့်ရတယ်၊ ငါတို့ကို ယူဆောင်လာခြင်းသည် ငါတို့အတွက် ကောင်းသော စင်္ကြံ၌ ငါတို့ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ၊
လေးစားစွာဖြင့် Othipron Nefshatim Halevi
'မင်းအဖေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား' နဲ့ 'မင်းအမေရဲ့ သွန်သင်ချက်' - ထမ်းပိုးကို လက်ခံတာ ဒါမှမဟုတ် နားလည်မှုနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းလား။
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/02 တွင် ၁၇:၀၁
ဖန်ဆင်းရှင်သည် သူ၏အလိုဆန္ဒနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများကြားတွင် ပြီးပြည့်စုံသောအထောက်အထားရှိပါက၊ လူသည် သူ၏ကောင်းသောအရာနှင့် မှန်ကန်သောအရာကို ခံစားသိရှိနိုင်ပြီး သူ၏ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှ ရရှိသောညွှန်ကြားချက်များကြားတွင် ကွာဟချက်ရှိနိုင်သည်။ ဤကွာဟမှုသည် 'ဖြစ်နိုင်သည်' သာမဟုတ် လိုအပ်သော်လည်း၊ လူသည် Kono ၏ဆန္ဒကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်သရွေ့ ၎င်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ဤအရာ၏မျက်နှာတွင်၊ လူသားသည် နားမလည်လျှင်ပင် ဤလောကကို ဖန်ဆင်းရှင်သည် တရားစီရင်ခြင်း၌ ထမ်းပိုးကိုလက်ခံခြင်း၌ ကျေနပ်နိုင်သော်လည်း ယင်းသည် မလုံလောက်ပါ။ လူသည် Kono အပေါ် သစ္စာစောင့်သိသော 'ကျွန်' ဖြစ်ရုံသာမက Kono ၏ ဆန္ဒကို မည်ကဲ့သို့ ပုံဖော်ရမည်ကို သိသော 'ကျောင်းသား' လည်း ဖြစ်သင့်သည်။
'ကျွန်' အတွက် 'လုပ်ပါ' သို့မဟုတ် 'လုပ်ပါ' ဟု ရေးပြရန် လုံလောက်သည်။ တိကျသေချာသော ညွှန်ကြားချက်ကို မခံယူဘဲ ခြေတစ်လှမ်းမလှမ်းဘဲ မိမိရဗ္ဗိ၏ အလိုဆန္ဒကို မည်ကဲ့သို့ ညွှန်ကြားရမည်ကို သိသော 'ကျောင်းသား' ဖြစ်ရန်အတွက် 'တစ်စုံတစ်ခုမှ နားလည်ခြင်း' လိုအပ်သောအခါ၌ပင် 'ပညာ' နားလည်မှု ရှိရမည်၊ အဓိပါယ်အားဖြင့် သဘောတရားများကို ကျင့်သုံးနိုင်၏။
ဤအဆုံးသတ်တွင် 'ကျောက်ပြားများပေါ်တွင် ရေးထွင်းထားသည်' ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အထက်မှ ရေးထားသော Torah ကို ပေးအပ်ထားသော်လည်း Torah ၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် ယုတ္တိကို နားလည်ရန် ရှာဖွေသော 'ပါးစပ် Torah' ဖြစ်ရမည်၊ Torah နိယာမများ - လူသည် အရာဝတ္ထုများ၏ ဝိညာဉ်ကို စုပ်ယူနိုင်သည်။
လွတ်လပ်ခြင်းတရားကို ရှင်းလင်းဖော်ပြသော ပါးစပ်မှ Torah ဖြင့် - လူသားသည် 'Yifron' ၏အကျပ်အတည်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ 'ပြင်ပထမ်းပိုးကိုလက်ခံခြင်း' မှစတင်ခဲ့သော ဖန်ဆင်းရှင်၏အလိုတော်ကြောင့် - 'Torah Delia' သည် ပို၍ပို၍တိုးလာပါသည်။ သူနားလည်ပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။
ရိုးသားစွာ၊ Enoch Hanach Feinschmeker-Felti
“အချင်းတို့ [ပညာအပင်၌ရှိသော] ဒုစရိုက်သည် တူညီသော ဉာဏ်သမ္ပတ္တိတရားတို့မှ လွတ်၍ အပြစ်ဒဏ်ကို ခံရသောအခါ၌ 'အသင်တို့သည် အကောင်းအဆိုးကို သိတော်မူသော ဘုရားကဲ့သို့ ဖြစ်၏' ဟု ဆိုကာ 'မုသာဝါဒကို သိသူ' ဟု မပြောဘဲ၊ 'အလိမ်အညာနဲ့ အမှန်တရားကို အောင်မြင်သူများ'။
လိုအပ်သောအရာများတွင် အကောင်းနှင့်အဆိုး လုံးဝမရှိပါ မုသာသစ္စာမှတပါး” (မွန်၊ အပိုင်း ၁၊ P.B.)
ဤနေရာတွင် Maimonides သည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပြောဆိုနေပြီး Eitipron အကျပ်ရိုက်မှုကို ပျက်ပြယ်စေပါသည်။
ဤသည်မှာ ယဉ်ကျေးခြင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည့် ကော်လံ 177 ကိုကြည့်ပါ။
အကိုးအကားအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်ရသည်၊ နားမလည်နိုင်သော်လည်း Maimonides ၏စကားလုံးများနှင့် ပြဿနာကို မတွေ့ခဲ့ရပါ။
ဝါကျကို နှစ်ပိုင်းခွဲသင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်-
"သင်သည် အကောင်းနှင့်အဆိုးကိုသိသောဘုရားသခင်နှင့်တူသည်" - ဤသည်မှာ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ၊ ရုပ်ချောပြီး ညစ်ညမ်းသော၊ ပိုကောင်းသည် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးရန်အတွက် သင့်ထံတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အသိတရားအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒီတော့ အခု အကျင့်စာရိတ္တကလည်း မင်းကို အကောင်းနဲ့အဆိုးလို့ ထင်နေတာပဲ။
"ထို့ပြင် [အခန်းငယ်] သည် မုသားနှင့် သမ္မာတရား သို့မဟုတ် မုသားနှင့် သမ္မာတရားကို ရရှိသောသူများကို မဆိုထားပေ။ လိုအပ်သောအရာများတွင် အကောင်းနှင့်အဆိုး လုံးဝမရှိ၊ မုသားနှင့်အမှန်တရားမှတစ်ပါး" - ဤတွင် Maimonides ဆိုသည်မှာ အကျင့်စာရိတ္တကို ဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဤသဘောအရ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးကွာပြီး အမှန်တရားနှင့် မုသာဝါဒဖြစ်သည့် အမှန်တရားနှင့် မုသာဝါဒဖြစ်သော အကျင့်စာရိတ္တကို ယခင်က သိမြင်ခဲ့ရသည့် ဉာဏစွမ်းရည်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
မေးခွန်းတစ်ခုနှင့် အဖြေတစ်ခုအဖြစ် ဖတ်သင့်သည်- အဘယ်ကြောင့် "မုသားနှင့် အမှန်တရား" ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို အဘယ်ကြောင့် မပြောခဲ့သနည်း။ ဖြေ - ရှုံးလို့လား။ သို့သော် ဘုရားသခင်၌ လိုအပ်သောအရာများ (သီလ) သည် အကောင်းနှင့်အဆိုးမဟုတ်သော်လည်း အမှားနှင့်အမှန်ဖြစ်သည်ကို သင်သိလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင် Eitipron ၏အကျပ်အတည်းသည် မလိုအပ်ပါ။
စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကို အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ယဉ်ကျေးခြင်းနဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ Eitipron ၏အကျပ်အတည်းကိုမဖျက်နိုင်သော Maimonides တွင်အချို့သောထုတ်ပြန်ချက်ရှိသည်မှန်လျှင်ပင်။ အများစုမှာ Maimonides သည် အကျပ်ရိုက်မှုတွင် သူ့ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်ရှိကြောင်း ငြင်းခုံနိုင်သည်။
အကျင့်စာရိတ္တ-စာနာမှု သို့မဟုတ် အကျင့်စာရိတ္တ-ဟန့်တားမှု။
24 Adar 03 2022 - 00/50/XNUMX တွင် ၁၇:၁၂၊
Adash XNUMX ရှိ SD ACH Tov
'သီလ' နှင့် 'သီလ' အကြား ခြားနားမှု မဟုတ်ဘဲ 'ကရုဏာ' နှင့် 'ဟန့်တားခြင်း' အကြား ခြားနားမှု မရှိပါ။ တစ်ဖက်တွင်မူ Detersh တွင် အပြစ်သားအား ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ လက်စားချေရန် တားမြစ်ခြင်း အကျင့်စာရိတ္တ ရှိပြီး နောင်တွင် အပြစ်သားထံမှ ရာဇဝတ်မှု ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်ခြင်း၏ 'အိုမင်' အားလုံးကို နှုတ်ဆောင်ပေးမည့် အကျင့်စာရိတ္တ ရှိပါသည်။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သိသာထင်ရှားသော ဟန့်တားမှုလိုအပ်မှုနှင့် ကရုဏာရှိလိုသော မြင့်မြတ်သောအလိုဆန္ဒတို့အကြား မျှတမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည့် မှန်ကန်သောဆေးပမာဏကို ပေးဆောင်မည့် 'မြင့်မြတ်သောအမိန့်တော်' လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟန့်တားခြင်းသည် အမုန်းတရားနှင့် မကောင်းမှုဝါဒကို တီထွင်ခဲ့သော အာမလက်နှင့် ခါနာန်လူမျိုးများ၏ အမြစ်မှ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် လိုအပ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ကရုဏာတရားသည် ၎င်းတို့အား ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ ဦးစွာခေါ်ပြီး 'ဦးတည်ချက်ပြောင်းခြင်း' ဖြင့် လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား၏ အခြေခံတန်ဖိုးများကို လက်ခံခြင်းအားဖြင့်။
လေးစားစွာဖြင့် Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas Cherries
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/01 တွင် ၁၇:၀၁
တြိဂံစကျင်ကျောက်လုံးဝိုင်း။ ၎င်းသည် တြိဂံ၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စက်ဝိုင်း၏ ဂုဏ်သတ္တိအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် အရာဖြစ်သည်။
အဝိုင်းတြိဂံဖြစ်သည့် အရာသည် စက်ဝိုင်းပုံဖြစ်ပြီး မျဉ်းဖြောင့်သုံးကြောင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်းသည် နေ့စဉ် ယုတ္တိဗေဒနှင့် ဆန့်ကျင်နေသော်လည်း၊ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် အဖြစ်မှန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုတ္တိဗေဒ၏ အသံများကို လိုက်မမှီပါ။ မဟုတ်ရင် ငါတို့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 တွင် ၁၇:၀၁
သင်ဖော်ပြထားသောပုံသည် ဘာသာရေးတန်ဖိုးများကို ဘုရားသခင်အပေါ် တွန်းအားပေးကြောင်း ပြသသည်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ သူဖြစ်ရခြင်း၏ အရည်အချင်းအားဖြင့်၊ သူကိုယ်တိုင်သည် အချို့သောဘာသာရေးတန်ဖိုးများ (သူဖန်တီးခဲ့သော) အကျင့်စာရိတ္တတန်ဖိုးများကို ငြင်းပယ်နိုင်လောက်အောင် အရေးကြီးကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်သော အခွင့်အာဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများသည် စည်းနှောင်မှုရှိသောအချက်က ၎င်းတို့သည် ဦးစားပေးစာရင်းတွင် ပထမဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ကျွန်ုပ်၏ (သို့မဟုတ် Tirgitz ၏) အငြင်းအခုံကို နားမလည်ခဲ့ဟု ယူဆပါသည်။ ဘာသာရေးတန်ဖိုးများသည် မိမိနှစ်သက်ရာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်ဟု ယူဆပါက အကျင့်စာရိတ္တနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ဘာသာရေးတန်ဖိုးကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ကိုက်ညီသော ဘာသာရေးတန်ဖိုးကို သူဆုံးဖြတ်နိုင်လျှင် အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုရမည်နည်း။ ဘာသာရေးတန်ဖိုးများသည်လည်း သူ့လက်ထဲတွင်မရှိဟု အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/15 တွင် ၁၇:၀၁
သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်သည် ယခင်က နားမလည်ခဲ့ သော်လည်း အကြောင်းပြချက် နှစ်ခုကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ ထင်မြင်ချက်ကိုပင် မမှတ်မိပါ။
1. ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ လုံး၀ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးစနစ် (မကောင်းမှုကင်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်း မင်းပြောသလို) ဖန်တီးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကျင့်စာရိတ္တအခြေအနေနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လုံးလုံးလျားလျား စွန့်လွှတ်နိုင်သောကြောင့် သူ့ကို အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့သော် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် တစ်စုံတစ်ခုကို လိုချင်သည်ဟု ယူဆပါက အချို့သော ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် အမှန်ဆုံးဖြစ်မည့်အရာကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် Torah တန်ဖိုးများနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကြား သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုကိုလည်း ရှင်းပြထားသည်။
2. Torah တန်ဘိုးတည်ရှိမှုကြောင့် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးသွားသော မည်သူမဆို ဘုရားသခင်သည် ဤကမ္ဘာ သို့မဟုတ် နောင်တွင် လျော်ကြေးပေးနိုင်ပါသည်။ ခြုံငုံအကျဉ်းချုပ်တွင် Torah တန်ဖိုးမရှိဘဲ ဖြစ်သင့်သည့်အတိုင်း သူ၏ပျော်ရွှင်မှုအတိုင်းအတာသည် ရှိလာမည်ကို သေချာစေနိုင်သည်။
1. ဆိုလိုတာက သူ့ကို အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေတယ်။ အတားအဆီးမရှိ နှစ်သက်သလို စံနစ်တကျ သတ်မှတ်ပါက အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ညီညွတ်ခြင်းကို အဘယ်အရာက တားဆီးမည်နည်း။
2. အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုအတွက် လျော်ကြေးပေးနိုင်သည်မှာ မှန်ပေမည်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမှာ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဤတန်ဖိုးများကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
1. သူနှစ်သက်သည့်အတိုင်း စနစ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်၊ သို့သော် အကျင့်စာရိတ္တကို ချိုးဖောက်သည့် ဘာသာရေးတန်ဖိုးများ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နေရာများတွင် ရှိနေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သူသည် မည်သည့်ဘာသာရေးစနစ်ကို ထူထောင်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အကျင့်စာရိတ္တကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသောသူများကို ရွေးချယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
လောကကို မဖန်တီးရန် မရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း (ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်) ဤလောက၏ အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးနှင့် ဘ၀ဒုစရိုက်နှင့် ယှဉ်၍ မဖန်တီးနိုင်ပေ။ ဤသည်မှာ လောကကို ဖန်ဆင်းခြင်းဟု မဆိုလိုပါ၊ သို့သော် သူသည် လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီးလိုပါက (!) လိုချင်လျှင် ၎င်းတွင် မကောင်းမှုလည်း ရှိလိမ့်မည်။
သူ့အပေါ် မမှီခိုဘဲ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှု မရှိပါက၊ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသော ကိုဟင် ဇနီးသည်သည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ခွဲခွာရမည်ဟု မဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန် အဘယ်အရာက တားဆီးသနည်း။ သူသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် (ဤအသေးစိတ်မပါဘဲ Torah ကို ပေးပါ။) ဘာကန့်သတ်ချက်က သူ့ကို ဒီလိုမဖြစ်အောင် တားတာလဲ။ မကောင်းမှု၏ အကြောင်းအရင်းတွင်၊ တင်းကျပ်သော သဘာဝနိယာမများသည် ဒုက္ခနှင့် မကောင်းမှု အမှတ်များမပါဘဲ တည်ရှိနိုင်သည်ဟု ငါရှင်းပြခဲ့သည်။ တခြားစနစ် မရှိပါဘူး။ သို့သော် ဘာသာရေးဥပဒေများ၏ စနစ်များသည် ၎င်းတို့အပေါ် အတားအဆီးမရှိပေ။ သူတို့ထင်သလို။ ထို့ကြောင့် Cohen ၏ဇနီးမပါဘဲ ပညတ်တော်ဆယ့်လေးခုကိုသာ ဆုံးဖြတ်ရန် ဘာသာရေးအခြေအနေ၌ အဘယ်အရာက တားဆီးသနည်း။
အရှင်ဘုရား နရာလီ၊ ကော်လံတစ်ခု ရေးသင့်တယ် (ဒါမှမဟုတ် မင်းရေးတာ ငါမသိဘူး)
ဟာလက္ခ၏ အပိုင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ခွင့်ပြု ၊ ပယ်ခြင်း ၊
[မင်းဟာ အောင်နိုင်သူမဟုတ်တဲ့အရာကို အောင်နိုင်သူအဖြစ် လုပ်ခဲ့တယ်။ ဝိုးတဝါး တစ်ခုခုကို ခံစားလိုက်ရတယ် (ဒါက မင်းရဲ့ စကားလုံးတွေက ငါ့ဆီ ထွက်လာတယ်) မင်းက အဲဒါကို ပြတ်ပြတ်သားသား သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ဘူး]
ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် halakhah နှင့် အကျင့်စာရိတ္တတို့ကြား ကွာခြားမှုမရှိဟု ပုံတွင်ပြသထားသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးတွင်၊ လူသားအားလုံးသည် ဤခြားနားချက်ကို အသိအမှတ်ပြုကြပြီး ၎င်းတို့၏ ပင်ကိုယ်တစ်ဝက်ကို ခံယူရန် သင့်လျော်ပါသည်။ မစ်ဇဝသ် (သို့) တည်ရှိမှု နှင့် ပါသွားသော ထူးထူးခြားခြား ခံစားမှုမျိုး မရခဲ့သော ဆုံးရှုံးမှုကို နောင်တရလျှင်ပင် ငြင်းပယ်ခံရခြင်းကြောင့် လာအိုနိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်သွားရခြင်းအတွက် နောင်တရနေသူတစ်ဦးကို မဒင်ကိစ္စတွင် ကြီးကြီးမားမား ပယ်ချခံရခြင်း ရှိကြောင်း၊ ဤသည်မှာ Tza'a ဖြစ်သည်)၊ ကျင့်ဝတ်အရ၊ သာမန်လူများသည် Shabbat တွင် kosher လူမျိုးခြားများကို ကယ်တင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိုယ်ကျင့်တရားဥပဒေကို ချိုးဖောက်မိသည့်အတွက်လည်း နောင်တရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဟာလခဟ်တွင် ဘုရားသခင်သည် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ပြုပြင်ပေးနေပြီး ကိုယ်ကျင့်တရား၌ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ပြုပြင်ပေးခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သီအိုရီတစ်ခုဖြင့် သင်ရှင်းပြခဲ့သည်။ သို့သော် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မရှိလျှင် လူတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို မည်သို့ အလေးထားကြသနည်း။ သူတို့ (ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည်) မှားနေသလား၊ ဤနေရာတွင် စံနှုန်းတင်းမာမှု မရှိသော်လည်း မသိနားမလည်မှုတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
ရှင်းပြရန် ပညတ်တော်များ တည်ရှိနေကာ ၎င်းတို့ကို ငြင်းပယ်သည့်တိုင်အောင် ပညတ်တော်များ တည်ရှိနေချိန်အထိ ယင်းကို ထင်ရှားစွာ ထည့်သွင်းသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပညတ်တော်သည် လက်တွေ့ကျသော ညွှန်ကြားချက်မဟုတ်သော်လည်း နိယာမညွှန်ကြားချက်သာဖြစ်ပြီး ပဋိပက္ခတစ်ခုအစား ဤနေရာတွင် အမှန်တကယ် ပညတ်တစ်ခုနှင့် ဤနေရာတွင် ပညတ်တစ်ခုရှိပြီး ထို့ကြောင့်လည်း ပဋိပက္ခနှင့် ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ရမည့်အစား ပြဿနာရှိနေပါသည်။ (ထင်မြင်ယူဆတာကလွဲရင် အမျိုးမျိုးသော နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို လုံးဝရောက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး)။
ဒါက အခြေခံအားဖြင့် Raqa ပါ (တကယ်တော့ ကမ်ပိန်းအတွက် လိုအပ်သလို သက်တမ်းတိုးဖို့ ရေးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ မဲဆွယ်တာကို မလေ့လာဘဲ ပြုတ်ကျလာတဲ့ Rosh Hashanah ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆူဖာကို ထိုးနှက်ရင် သူပြောတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ on Shabbat စင်စစ်မူကား၊ ငါ *တကယ် * နားမလည်ဘူး၊ ငါ့ကိုရှင်းပြနိုင်မလား။ (အဲဒီမှာ မင်းတကယ်ထင်တယ်လို့ ရေးထားတယ်)။ ဤပညတ်သည် လက်တွေ့ကျသော ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည်၊ တဖက်တွင် ငါအမိန့် A နှင့် တစ်ဖက်တွင် ငါ B ကို ပညတ်ထားပြီး အမှန်မှာ ငါ B ကို မိန့်ဆိုသည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်မရှိပေ။
မစ်ဇဝသ် ဆုံးရှုံးရခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းမှုကို အဘယ်ကြောင့် မမြင်ရသနည်း။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဖျားနေလို့ ယောက္ခမမဟုတ်တဲ့သူနဲ့တူတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို စိတ်ချမ်းသာစေပြီး သူ့အခြေအနေမှာ သူ့တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတဲ့ ရဗ္ဗိတွေအကြောင်း ဇာတ်လမ်းတွေက သိကြပါတယ်။ ထို့အပြင် ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော လာအိုတွင် ၎င်းသည် သာမန်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူအများက ၎င်းကို ကျင့်သားရလာကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သိုးမွှေးနှင့်ပိတ်ချောတစ်ထည်တွင် ရှတ်နက်ဇ်ရှိကြောင်း မည်သူမျှမမှတ်မိပါ။ သို့သော် USSR ရှိလူနာတစ်ဦးတွင်၎င်းသည်ရှားပါးသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်မကောင်းပါ။
လူတို့သည် အခြားသူများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုနှင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို ဂရုစိုက်ကြသည်မှာ သေချာပါသည်။ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်က ဘာနဲ့ဆိုင်လဲ။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရင် နောင်တမရဘူး။ ဒါကြောင့် ငါအပြစ်ရှိတဲ့အခါ (မှန်ရင်တောင်) ငါတောင်းပန်ပါတယ် သေချာတယ်။ အပြစ်တင်စရာမရှိသော မတော်တဆမှုတစ်ခုတွင် Hezi မှလူများကို အပြစ်တင်ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုပင် အပြစ်ပေးရမည်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် မည်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရမည်နည်း။
ပညတ်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကိုးကားတဲ့ ငါ့စကားတွေကို ငါမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Talmudic logic စီးရီးရဲ့ တတိယမြောက်စာအုပ်မှာ အဲဒီအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့်ရေးခဲ့တယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးသည် ပညတ်တော်နှင့် လက်တွေ့ကျသောသင်ကြားမှုကြား ခြားနားချက်အတွက် ရည်စူးထားသည်။ ပညတ်တော်သည် အစစ်အမှန်တရားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကျသောသွန်သင်ချက်သည် ယင်း၏ဆင်းသက်လာမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အလွန်အမင်း ဟားခါးတဲ့အချက်ပါ။ မင်းအဲဒါကို မင်းငါ့ကိုသတိရတယ်။
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/18 တွင် 01:XNUMX
မင်းရဲ့စကားထဲက "ကိုးကား" ဟာ RAKA က နိဂုံးချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ပညတ်တော်ဟာ ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သက်သက်မဟုတ်ဘူး (တကယ်လို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ ဘုရားသခင်အမိန့်တော်ရှိတဲ့ mitzvah နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ မပြုရန် တားမြစ်ခြင်းပင်)။ထိုအခါ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် တည်ရှိခြင်းသာမကဘဲ၊ အဲဒီမှာ မင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ငါ မှန်ကန်စွာ နားမလည်နိုင်ပေမယ့် ငါ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ RAA ရဲ့ စကားလုံးတွေက လုံးဝ နားမလည်နိုင်သေးဘူး။ ဒီအကြံအစည်ကို နားလည်အောင် ကူညီပေးရင် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းမှုအနေနဲ့ကတော့ အလေ့အထမရှိတဲ့လူတွေရဲ့အမှား (ရှေးရိုးစဉ်လာနဲ့ ဟာလခရစ်) စာအုပ်တွေကြားမှာ ခြားနားချက်တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်၊ အကြောင်းကတော့ သူတို့က ခြေဖနောင့်နဲ့ မနင်းမိခြင်းအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံသာမက မြိတ်အတွက်ပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ သတိပေးထားရင်တောင် baboon ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချက်ကို ကျွန်တော်လုပ်တယ်။
အဓိက ကတော့ - သီလသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်မှုကြောင့်သာ စည်းနှောင်ထားလျှင် သီလနှင့် ဆန့်ကျင်သော လိုအပ်ချက်တစ်ခု ရှိနေလျှင် ပျက်စီးမှု တစ်ထောင်ကိုပင် ထိခိုက်နစ်နာစေမည့် စည်းမျဥ်းပြဿနာ မရှိပေ။ ကော်လံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လူတို့သည် ပဋိပက္ခခံစားရပြီး ဘုရားသခင်ရှေ့သို့ လှည့်သွားရသည့်အချက်၏ အဖြေကား အဘယ်နည်း။ မင်းရဲ့အဖြေက ငါနားလည်သလောက်တော့ ဒါဟာ အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ပညတ်တော်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါ ထိခိုက်နစ်နာစေမယ့် စံပြပြဿနာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် မပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ သီအိုရီသည် လူတို့၏ခံစားချက်များကို ရှင်းပြရန်နှင့် ၎င်းတို့အား တရားမျှတစေရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဟုတ်လား?
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/19 တွင် 52:XNUMX
ဝိညာဉ်ရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်မှတစ်ဆင့် ယင်းကို နားလည်နိုင်သည်။ ပေးဆောင်ရမည့် ကုသိုလ်ကို ငါလုပ်ရန် တာဝန်မရှိသော်လည်း၊ သို့သော် အကျိုးအမြတ်တစ်ခုတည်းက mitzvah ကို သတ်မှတ်ရန် မလုံလောက်ပါ။ နိစ္စဓူဝအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ပညတ်တော်ဟာလည်း ထာဝရတည်ရှိနေမှာပါ။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အခြားပညတ်တစ်ခုကြောင့် ၎င်းကို ကျော်လွန်ရပေမည်။
သူမလုပ်ခဲ့တဲ့ ဥပမာတစ်ခုက အဲဒီအချိန်က အမျိုးသမီးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် တန်ဖိုးရှိကြောင်း ခုံသမာဓိလူကြီးအားလုံးနီးပါး၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အများစုမှာ ၎င်းကို ဖြစ်တည်မှု mitzvah ဟုပင် မှတ်ယူကြသည် (Rabbi Bish ဆိုသည်မှာ Safra က ၎င်းကို ငြင်းပယ်သည်ဟု ရေးသည်)။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်အရ အမျိုးသမီးများသည် ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ ဒီလိုလုပ်စရာ မလိုဘူး၊ ဒါလုပ်ရင် ဘယ်လို မိဿဟာရ ရှိမှာလဲ။
ထိခိုက်နစ်နာမှုရဲ့ စံပြပြဿနာတစ်ခု ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ ဘုရားသခင်နှင့်မတူဘဲ သင်လိုအပ်သောအရာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့လျှင်ပင် ဖျက်ပစ်မည်မဟုတ်ပေ။
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 တွင် 15:XNUMX
ပညတ်တော်သည် ထာဝစဉ်တည်ရှိသော်လည်း ကျော်လွန်ရမည်ဟူသော နိမိတ်ပုံသည် ပြဿနာဖြစ်နေခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ တိုက်ခိုက်မှု၏ရင်းမြစ်သည် ထောင့်စွန်းမှ ဆိတ်ဆိတ်နေသော ဝိညာဉ်ရေးရာ အချက်အလက်များမှဖြစ်ပြီး မစ်ဇဝသ်သည် ကျွန်ုပ်အား ဘာလုပ်စေလိုသည်ကို ပြောပြရန် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော သတ္တဝါဖြစ်သည့်အခါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ထိုသို့ပြုရာတွင်၊ Gd ရှိ ရှဗ္ဗတ်တွင် တန်ခိုးအာဏာကို ရှောဖာနှင့် ခိုင်းနှိုင်းကာ၊ Gd သည် ကျွန်ုပ်အား ပုတ်ခတ်ရန် အမှန်တကယ် တားမြစ်ထားသည် (ပညာရှိများကို နာခံရန် ညွှန်ကြားထားသည်။ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲကြောင်း ကျွန်ုပ် ဝန်ခံပါသည်၊ သို့သော် မဟုတ်ပါက တည်ရှိနေပုံရသည်။ တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော်လည်း ဘုန်းကြီးသောမျက်လုံးများကြားမှ သူ့ကိုပုန်ကန်ပြီး လှိုင်းတံပိုးမှုတ်စဉ်တွင် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များကို ကျင့်နေသည်ဟု ပြောခြင်းသည် ထူးဆန်းသောအရာဖြစ်သည်။ MM သို့ဖြစ်လျှင် ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ဆင်ခြင်ရပေတော့မည် (ပြစ်မှု၌ နောက် မိဿဝဟနှင့် ယှဉ်၍ အာရှာဝစ်၌ သင်တင်ပြသော ဆွေးနွေးချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ဤအကြောင်းကို တွေးတောဆင်ခြင်မိပါလိမ့်မည်၊ ထို၌ ဝက်သားအရသာကို မျိုချလိုက်၏၊ Dauriyta မှတားမြစ်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် Raqa သည်စားရန်အမိန့်မရှိကြောင်းဝန်ခံသည်)
မေးခွန်းထုတ်တဲ့ ကိစ္စမှာ ဒီဒုက္ခကို တားမြစ်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ပညတ်တော် မရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်လို စံပြဿနာကို ထိခိုက်စေရမယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူး။ တစ်နည်းဆိုရသော် မထိခိုက်စေရန် ပညတ်တော်၏ အကျင့်စာရိတ္တတွင်ပင် တည်ရှိနေသေးသော်လည်း ယင်းကို ကျော်လွှားရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်းကို သိပြီး အသင်းနှင့် ဘာလုပ်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အသိဉာဏ်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ဤကိစ္စကို ကျွန်ုပ်က အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရိပ်မိမည်မဟုတ်ပေ။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ဤအချက်ကို လေးထောင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် ကျွန်ုပ် ခံစားနေရပေမည်။
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 တွင် 41:XNUMX
ဒွိရိတ္တနှင့် မိဇဝတို့ကို တားမြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သားကောင်ပြုလုပ်သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၏ သာ၍သာလွန်သော ဥပမာတစ်ခု (တားမြစ်ချက်၌ အစားအစာသည် အစာအဖြစ် ကျန်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ မိဇဝတရားမရှိသည်ဖြစ်စေ မိဿဝတရားလည်း ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ) သည် သမီး၏ဒုက္ခ၊ ညီအစ်ကိုများထံသို့ Beit Hillel နှင့် ခွေးကောင်ကို တားမြစ်သည်။ သမီးရဲ့ဒုက္ခကို ညည်းတွားနေတဲ့သူတွေတောင် ဝမ်းနည်းခြင်းရဲ့ mitzvah ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားလို့ သူတို့ထင်မြင်ယူဆမိပါရဲ့လား။ (Mitzvah အတွင်းရှိ စည်းမျဉ်းများကြား နှင့် မတူညီသော mitzvos တို့တွင် စည်းမျဉ်းများကြား ပိုင်းခြားနိုင်သည် ။ သို့သော် အချက်တစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်ုပ်နှင့် အတိအကျ အတူတူပင်ဖြစ်သည်)
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/22 တွင် 55:XNUMX
ကော်လံမှာ ရေးခဲ့သလိုပဲ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေရှိတယ်။ သို့သော် ၎င်းတို့အား ဥပဒေပြုရန်နှင့်/သို့မဟုတ် အမိန့်ပေးသည့်အဖွဲ့မရှိလျှင် ၎င်းတို့သည် တရားဝင်မှု မရှိပါ။
တားမြစ်ခြင်းနှင့် တာဝန်မရှိခြင်းကြားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင် ကွာခြားချက်မရှိပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံပြီး ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ပါ။ ငါ အံ့သြတယ်။
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/01 တွင် 01:XNUMX
ရာကာ၏စကားသည် အချို့သော အကျင့်ကြောင့် ပယ်ခြင်းမပြုသော လောဒါရိတ္တ၌လည်း ဖြစ်တတ်သည်ဟု သင်ထင်မြင်ပါသနည်း၊ ကာမဂုဏ်ကို လွန်ကျူးမိပါက လာအိုသည် မိဿဝတ္တုကို လွန်မြောက်သည် သို့မဟုတ် နှုတ်ကပတ်တော်၊ Dauriyta mitzvah ကိုဖျက်သိမ်းသော Durban တားမြစ်ချက်တွင်သာ။
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/07 တွင် 14:XNUMX
ထင်မြင်ချက်များနှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ရှေးဦးစွာ ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ပြစ်မှုတွင် နောက် mitzvah သည် တရားမ၀င်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများ ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ပြီးတော့ ပထမ က ဒီစည်းမျဉ်း ခြားနားချက် ကို အခိုင်အမာ ပြောပြီး ရွံရှာဖွယ် မရှိဘူး ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အများစုမှာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဥပဒေအား ပယ်ချခြင်းမပြုသောအခါ (ဥပမာ၊ ၎င်းသည် တပြိုင်နက်တည်းမဟုတ်) တရားရုံးချုပ်၏ အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
သင့်ထင်မြင်ချက်အရ၊ ဤကဲ့သို့သော mitzvah အတွက်တန်ဖိုးမရှိသောကြောင့်၊ ဤကျမ်းပိုဒ်အတွက် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုမလိုအပ်ပါ။ သို့သော် Gemara သည် "တက်နေသောဓားပြကိုမုန်းသောသူ" ထံမှဤအရာကိုသင်ယူသည်။ ထို့အပြင် Thos ၏အဆိုအရ
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/10 တွင် 29:XNUMX
ငါသည် ပြစ်မှု၌ နောက် mitzvah နှင့် ပတ်သက်၍ အထက်တွင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သော်လည်း မိဇ်ဗာ၏ လုပ်ရပ်သည် အပြစ်မဟုတ်သော လုယက်သော သုက္ခ၏ ဥပမာကိုသာ တွေးတောမိသည် (R. Asher Weiss နှင့် Ezal တို့၏ စကားများအကြောင်း ဆွေးနွေးမှု ရှိပါသည်။ ယခု ကျွန်တော် Wikipedia တွင် Pesach တွင်နှစ်ထားသော matzah ကိုစားခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် matzah ကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် matzah matzah ကိုမစောင့်ထိန်းကြောင်း (ရင်းမြစ်ကိုကျွန်ုပ်မစစ်ဆေးခဲ့ပါ) ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ပြီးတော့ မင်းပြောသလိုပဲ သက်သေပြနေတယ် (သူ့မှာ တခြား matzah မရှိဘူးဆိုရင် အဲဒါက Gd က သူ့ကို မက်ဇဟ်မစားဖို့ တားမြစ်ထားတာ ထင်ရှားပါတယ်)။
ကျမ်းပိုဒ်မရှိလျှင် အဘယ်အရာသည် တိုးပွားလာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မသိနိုင်ပေ၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဘုရားသခင် အမှန်တကယ် မှာထားသောအရာ ဖြစ်သည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ အခြား matzah မရှိလျှင် အစာစားရန် 'ငုပ်မတ္တာ' တွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဓားပြသည် ခိုးယူ၍ ခိုးယူသည်ရှိသော် ခိုးသူသည် ဓားပြဝယ်ပြီးသည်နှင့်ပင် အကြံအစည်ရှိသမျှနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအား ခံတွင်းတွေ့စေရန် စားသောက်ခွင့်သည် ယဇ်ပလ္လင်နှင့် မထိုက်တန်သေးပေ။ [ထို့ပြင်၊ မဟုတ်ရင် "ကျမ်းစာ မလိုအပ်ဘူး" ဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့ အယူအဆဟာ အတော်လေး သံသယဖြစ်စရာကောင်းပြီး အထူးသဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကို သွန်သင်ပေးတဲ့ ကော်လံတစ်ခုရဲ့ အလင်းမှာ၊ ငါတို့မှာ ဒီနေရာနဲ့ အဲဒီ့မှာ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ရှိတာကြောင့် ငါလည်း ၀န်ခံပါတယ်။ RAKA က သူ့စကားတွေပြောပြီး သူ့စကားတွေက လက်ခံနိုင်စရာလို့တောင် ထင်နေတော့ ဒီရှင်းပြချက်ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်လိုတယ်ထင်လို့ ပြဿနာတက်နေတယ်]
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင်ပြောသည့်အတိုင်း နှပ်မဿာစားသူသည် မဿဲအမိန့်ကို လုံးဝ မလိုက်နာဘဲ နှပ်ခြင်းတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်သည်ဟု ဆိုပါစို့။ သို့သော် Ya'akov အတွက် Shabbat တွင် US ရှိ Shofar ကိုမှုတ်ပြီး Shabbat Durban ကိုဖြတ်သန်းရန်အမိန့်ရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Torah အတွင်းရှိ ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများတွင် mitzvah "ကိုယ်တိုင်" ကို ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုသော အခြေအနေများအတွက်သာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ သို့သော် Durban မှငြင်းပယ်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းများတွင် mitzvah Dauriyta သည်တကယ်တော့၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်တားမြစ်ထားပြီးပညတ်တော်သည်အစဉ်အမြဲတည်ရှိသောဥပစာနှင့်တူသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းကိုချိုးဖျက်ရန်မှလွဲ၍ ကျန်ရှိနေပါသည်။
10 Adar 03, 2022 - 14/56/XNUMX တွင် ၁၅:၁၆၊
ဘာသာရေးဥပဒေ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ၎င်း၏အရင်းခံတန်ဖိုးများသည် ဘုရားသခင်အပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အမှီအခိုကင်းသော အချက်အလက်များမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု သင့်အကြံပြုချက်အတွက် - ဘုရားသခင်ကို ချည်နှောင်ထားသည့် အခြားအတိုင်းအတာကို သက်တမ်းတိုးမည့်အစား ဖြစ်ပေါ်လာသော ဓမ္မဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို ဤအယူအဆပေါ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည် လူသားများ လေ့ကျင့်မှု မြင့်မားရန် လိုအပ်သည်။ လူသားများ၏ လေ့ကျင့်မှုနှင့် ရွေးချယ်မှုတို့ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်၊ "ဘုရားသခင်သည် အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသူများပင်လျှင် ၎င်းတို့အတွက် Torah နှင့် mitzvos များစွာရှိသည်" ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးများကြားတွင် ဖြစ်နိုင်ချေများသော ပေါင်းစပ်မှုများရှိသောကြောင့် ရွေးချယ်မှုအတွက် ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသော တန်ဖိုးများ များပြားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကော်လံများထဲမှ တစ်ခုတွင် ရေးထားသည်ကို ကျွန်ုပ်မှတ်မိပါသည်။
10 Adar 03, 2022 - 16/30/XNUMX မနက် XNUMX:XNUMX
ငါဘာသာတရားရဲ့တန်ဖိုးကို မင်းလူ့လေ့ကျင့်မှုလို့ခေါ်တယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။ လူ၏ ပြီးမြောက်ခြင်းမှလွဲ၍ အရာဝတ္တုတွင် ရည်မှန်းချက်များ လုံးဝမရှိဟု သင်ဆိုလိုပါသလား။ ဥပဒေအားလုံးသည် လုံးဝ မတရားသဖြင့် (သူသည် အခြားသော ဥပဒေများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဥပဒေများကိုပင် ရွေးချယ်နိုင်သည်)။ ဒါပေမယ့် Tirgitz ရဲ့ အငြင်းအခုံက ပြန်လာတယ်၊ အကျင့်စာရိတ္တကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဘာကြောင့်များ ရှိနေတာလဲ။
10 Adar 03, 2022 - 22/07/XNUMX မနက် XNUMX:XNUMX
ဘာသာရေးတန်ဖိုးများကို Gd တွင် အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေသည်ဟု ရေးထားသော်လည်း ဘာသာရေးတန်ဖိုးများကြားတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်သည့်အခါတွင် အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်ပြီး အတိတ်ကို ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘာသာရေးပျက်စီးမှုများကို တားဆီးပေးသည်။ ဘာသာရေးတန်ဖိုးတွေကို သူ့အပေါ် ဘယ်လိုတွန်းအားပေးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်၊ သူလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်း သူတို့ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝတရား (ဘာသာရေးသဘာဝကိုတောင် မစွက်ဖက်ချင်ဘူးဆိုရင်) ဘာသာရေးတန်ဖိုးတွေကြား ပဋိပက္ခတွေမှာ ဘာကြောင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာလဲ။
11 Adar 03, 2022 - 01/53/XNUMX မနက် XNUMX:XNUMX
သူဒီလိုလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါက တန်ဘိုးကြီးတယ်လို့ သူ့ကို အတင်းအကြပ် ခိုင်းတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တ၌ပင် ခိုင်းစေခြင်းမပြုဘဲ ဤအရာသည် ကောင်းမြတ်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်သာဖြစ်သည်။
19 Adar 03၊ 2022 - 22/04/XNUMX တွင် ၂၂:၀၄
“သီအိုရီအရ တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့ ထပ်လောင်းတွေးထားပေမယ့်၊ တရားတော်ကို သစ္စာစောင့်သိသော ငါကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်သော သူသည် အပျက်အစီးမရှိစေရန် တန်ခိုးပြာဋိဟာကို လုပ်ဆောင်ပြီး ပျက်စီးမှုကို တားဆီးသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ”
သို့ဆိုလျှင်၊ ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေ မပြုသည်ဖြစ်စေ လူတို့ပြုလုပ်သော ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုအားလုံးကို တားဆီးရန် အဘယ်ကြောင့် အံ့ဖွယ်အမှုများကို အမြဲမလုပ်သနည်း။
20 Adar 03၊ 2022/19/24 တွင် ၁၉:၂၄
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကံကြမ္မာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် မူတည်နေတာကြောင့် သူ့မှာ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့် ငါတို့ကို ရွေးချယ်ခွင့် ပေးသနည်း ၊ ရွေးချယ်မှုမရှိဘဲ အမြဲတမ်း ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူခြင်း မပြုပါ (တကယ်တော့ ငါတို့ကို လုံးဝမဖန်တီးပေးဘူး) လို့ မေးတာနဲ့ တူပါတယ်။
20 Adar 03၊ 2022/19/41 တွင် ၁၉:၂၄
ကမ္ဘာကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင် အမှန်တကယ်မူတည်လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ရပ်များအပေါ်တွင်သာ ဝိညာဉ်ရေးထိခိုက်ခြင်းမှာ မမူတည်ပါ၊ အကြောင်းမှာ သင်ရေးသားထားသည့်အတိုင်း ၎င်းသည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ အပြင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကိုလည်း လိုလားပါက၊ တစ်စုံတစ်ခုသောအမှု၌ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဝိညာဉ်ရေးပျက်စီးမှုကို တားဆီးရန် အဘယ်ကြောင့် ကြားဝင်ခွင့်ပြုသနည်း။ အမှန်တော့၊ ကမ္ဘာကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင် မှီခိုနေမည်ဟူသော သူ၏မူဝါဒအတွက် အဝတ်အစားဖြစ်သည်။
20 Adar 03၊ 2022/23/28 တွင် ၁၉:၂၄
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင်မူတည်မည်ဆိုသည်က ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွင့်ပြုထားသော သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသော လုပ်ရပ်တစ်ခုအား ပြုမူခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။
19 Adar 03၊ 2022 - 22/33/XNUMX တွင် ၂၂:၀၄
"သူ့မေးခွန်းကို ငါရှင်းပြမယ်။ ကျွန်ုပ်၏နည်းလမ်းအရ၊ ဘာသာရေးတန်ဖိုးများမြှင့်တင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆန့်ကျင်သောသီလရှိရန် ဘုရားသခင်မိန့်မှာထားသည်။ သို့ဆိုလျှင်၊ Tirgitz က၊ ဘာသာရေးတန်ဖိုးများသည် သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေသည်ဟု ထင်ကာ သူ၏ မတရားဆန္ဒ (သူ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ဥပဒေပြုခြင်း) ၏ ရလဒ်မဟုတ်ဟု ငြင်းဆိုသည်။ အကယ်၍ ပညတ်တော်များသည် ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားသော “ဟာလခိခ်ဖြစ်ရပ်များ” မဟုတ်သော်လည်း၊ သူ၏ဥပဒေပြုချက်ဖြင့် ဖန်ဆင်းခံရပါက၊ ၎င်းတို့ကို ကွဲပြားစွာပြဋ္ဌာန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သူလိုချင်တာ (အမွေဆက်ခံသူ) ကောင်းစေချင်ရင် အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြဋ္ဌာန်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခများတည်ရှိနေခြင်းက ဟလာဟာဟ်၏ဥပဒေများ (သို့မဟုတ် ဟာလခဟ်၏တူညီသောဥပဒေများကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ဘာသာရေးတန်ဖိုးများ) ကိုလည်း ဘုရားသခင်အပေါ်အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေသောကြောင့် ၎င်းသည် ဤပဋိပက္ခများအတွက်မလိုအပ်ဘဲဖမ်းဆီးခြင်း (သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အား အနိုင်ကျင့်ခြင်း) ကို ခံရခြင်းဖြစ်သည်။"
mitzvos နှင့် Halacha ၏ဥပဒေများအားလုံးကို Gd တွင်အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေသည်ဟုမင်း၏စကားမှဆိုလိုသည်၊ သို့သော်သင်၏အငြင်းအခုံမှ၎င်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဥပဒေများနှင့် mitzvos တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးသာနုတ်ယူနိုင်သည်။ Shema ရွတ်ဆိုခြင်းကဲ့သို့ ပညတ်တစ်ခုသည် အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ဘဲ၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို Gd တွင် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ဟလာခ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း မလိုအပ်ပါ။
ထို့ အပြင်၊ ဘုရားသခင်က အကျင့်ပျက်သည်ဟုထင်ရသော တစ်စုံတစ်ရာကို အမိန့်ပေးသည့်ကိစ္စများတွင်ပင် ပိုမိုကြီးမားသော ကိုယ်ကျင့်တရားမမျှတမှုကို တားဆီးရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ- ကောင်တွေကိစ္စ။ ဘုရားသခင်သည် တိရစ္ဆာန်များကို မလိုအပ်ဘဲသတ်ရန် အမိန့်ပေးသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ သို့သော် ဤပညတ်တော်မရှိလျှင် လူတို့သည် တိုရဟ်ပေးကမ်းခြင်းမတိုင်မီ ဘာသာရေးဘဝတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ မပါဝင်သောကြောင့် ဘာသာရေးကို လုံးလုံးလျားလျား ငြင်းပယ်ကြလိမ့်မည် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဂျူးဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် ထက်မြက်လွန်းပြီး ဤအကူးအပြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှ အန္တရာယ်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ သတ္တဝါများကို ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုထက် ပိုအရေးကြီးသောအရာအဖြစ် တစ်ခါတစ်ရံ (သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေခြင်းမပြု) ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဆုချခြင်းကို ခံယူကြပါစို့။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် သူသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိ၏ သတ္တဝါများမှ တစ်စုံတစ်ဦးကို ထိခိုက်နစ်နာစေလိုလျှင် ထိုဆန္ဒကို မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိနိုင်ပြီး တစ်ချိန်ချိန်တွင် ထိုဆန္ဒကို စွန့်လွှတ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကို သီလထိခိုက်မှုထက် ပိုအရေးကြီးသောအရာအဖြစ် ဦးစားပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ . ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ပညတ်တော်များကိုပင် သူ့အပေါ် အတင်းအကျပ် မခိုင်းစေဘဲ ဟာလခ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ မဟုတ်သော်လည်း၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုထက် သူ့အတွက် ပိုအရေးကြီးသောကြောင့် မိန့်မှာရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည် အကျင့်ပျက်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်သည် အမြဲတမ်း ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်သည်ဟူသော ယူဆချက်နှင့် ဆန့်ကျင်နေပါက၊ ဘုရားသခင်သည်လည်း သူ့ကိုယ်သူ ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်သင့်သည်ဟု ငါဖြေပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိအလိုဆန္ဒကို စွန့်လွှတ်လိုက်သောအခါတွင် သူ့ကိုယ်သူ ဒဏ်ရာတစ်ခု ရှိလာသည် (မင်း၏ နောင်တော်ဘဝ၏ ဆင်ခြင်မှုတစ်မျိုး)။
20 Adar 03၊ 2022/19/27 တွင် ၁၉:၂၄
အမှန်မှာ၊ ငြင်းခုံမှုသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
အသတ်ခံရသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် နားမလည်ဘူး။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညတ်တော်တို့ကို အကြွင်းမဲ့ ရှင်းလင်းစွာ ပူဇော်ပါ။ ဟုတ်ပြီ ဤသည်မှာ သွယ်ဝိုက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်ဟု သင်ဆိုလိုလျှင် ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ယူဆသည်မှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။
သူ့အမြင်မှာ တစ်ခုခု ပိုကောင်းတယ်လို့ သင်ပြောတဲ့အခါ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ မတရားအလိုတော်ရဲ့ ရလဒ်မဟုတ်ဘဲ သူ့မှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တချို့ ရှိနေတာကို ဆိုလိုတယ်။
20 Adar 03၊ 2022/19/47 တွင် ၁၉:၂၄
ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု ထင်ရသည့် ပညတ်တော်များ ရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့မည်ပုံ သို့မဟုတ် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်ကို နားမလည်သော်လည်း ၎င်းတို့နောက်ကွယ်တွင် လေးနက်သောရှင်းပြချက်တစ်ခု ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် (ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်သော ပညတ်ချက်အားလုံးသည် သေချာပေါက်မဖြစ်ပေ၊ သို့သော် အနည်းဆုံး အချို့သောအရာများ ဖြစ်နိုင်သည်)။
သူ့အမြင်မှာ ဦးစားပေးအနေနဲ့၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ "ကိုယ်ပိုင်" လိုအင်ဆန္ဒတွေနဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သူ့အပေါ်၌ မလိုအပ်ဘဲ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောအရာမဟုတ်ဘဲ သူ၏အတွင်းစိတ်ဆန္ဒဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် မတရားသောအသုံးအနှုန်းသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်လျော်ကြောင်း ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ လက်မှတ်ရ စစ်တုရင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လိုသည့် ဆန္ဒကို ထင်သလိုဆန္ဒဟု ခေါ်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ (အပြင်မှ အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေခြင်းလည်း မပြုပါ)။ ဒါဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒတစ်ခုပါ။ ဘုရားသခင်သည် အချို့သောနယ်ပယ်တစ်ခုတွင် "အသိအမှတ်ပြု စစ်တုရင်ကစားသမား" ဖြစ်လိုပြီး အချို့သောလူများအတွက် တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို စွန့်လွှတ်လိုစိတ်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
20 Adar 03၊ 2022/23/31 တွင် ၁၉:၂၄
သင် ... နိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်နှင့် အလိုဆန္ဒများကို ဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်အတွက် ခက်ခဲသည်။
21 Adar 03၊ 2022/00/19 တွင် ၁၉:၂၄
ခြိမ်းခြောက်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်း မပြောပါဘူး။ ငါဆိုသည်ကား၊ (ဟာလခိ့အမှန်တရား) မရှိဘဲ သူ့အပေါ် အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေခြင်း မပြုသော်လည်း၊ သူ၏ သတ္တဝါများအတွက် ကိုယ်ကျင့်တရား ထိခိုက်မှုထက် သူ့အတွက် ပိုအရေးကြီးနေသေးသည်ဟု ငါဆိုပါသည်။
21 Adar 03၊ 2022/07/03 တွင် ၁၉:၂၄
သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ် အမိန့်မပေးဘဲ အမိန့်ပေးစရာ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သူ့ထင်သလို ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သလို ဒရာကူရှယာကို ဘုရင်ကြီးဆီ လွှဲပေးလိုက်တာပါပဲ။ မတရားလုပ်သည်ဖြစ်စေ အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေခြင်း (ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကို ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏တရားဝင်မှုကို အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့နှင့်အညီ ကျင့်ကြံခြင်းဖြစ်သည်)။ တတိယ ဖြစ်နိုင်ချေကို ကျွန်တော် မမြင်ပါဘူး။
21 Adar 03၊ 2022/11/28 တွင် ၁၉:၂၄
လက်မှတ်ရ စစ်တုရင်ကစားသမားဖြစ်လိုသူသည် မိမိထင်သလိုဆန္ဒရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ကို အတင်းအကြပ်ခိုင်းနေတာလား။
21 Adar 03၊ 2022/12/39 တွင် ၁၉:၂၄
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထင်သလို လုပ်မှာပါ။ မွေးရာပါဖြစ်ရင် သူ့ကို အတင်းအကြပ်ခိုင်းတယ်။
21 Adar 03၊ 2022/14/56 တွင် ၁၉:၂၄
အလုပ်၏လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် ပေးဆပ်ရန် ဘုရားသခင်အလိုတော် ကြီးကြီးမားမားရှိနေသည်။ နှစ်ခုစလုံးတွင်၊ ဤပန်းတိုင်များအောင်မြင်ရန် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုအပ်သည်။ ဤပန်းတိုင်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် တစ်စုံတစ်ဦးအား ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမှ လွတ်ကင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ လူသားများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက် တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်သကဲ့သို့၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော်လည်း ကိုယ်တော်၏လိုအပ်ချက်များအတွက် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။
21 Adar 03၊ 2022/14/59 တွင် ၁၉:၂၄
AHN ဒါကြောင့် သူ့ကို အတင်းအကြပ်ခိုင်းတယ်။ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပိုမိုပြီးပြည့်စုံစေရန်ဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သူ၏လက်ထဲတွင်မရှိပါ။
21 Adar 03၊ 2022/15/41 တွင် ၁၉:၂၄
အဘယ်ကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာ ခိုင်းစေရသနည်း။ သူရွေးချယ်နိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သူ့ကို အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေခြင်းဟူသည့် အလုံးစုံသောလိုအပ်ချက်သည် ဘုရားသခင်သည် အကျင့်ပျက်သောအရာကို ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လူသားတွေဟာ ကိုယ့်အကျိုးအတွက် အကျင့်ပျက်ခြစားတာကို ရွေးချယ်တတ်ကြတယ် (တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုတွေ)၊
21 Adar 03, 2022 - 17/02/XNUMX XNUMX:XNUMX
လူတွေက ဒါကို အတင်းအကြပ်လုပ်တယ်။ ရောဂါက သူတို့အပေါ် တွန်းအားပေးပြီး ကုစားတဲ့ နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
21 Adar 03, 2022 - 17/46/XNUMX XNUMX:XNUMX
၎င်းတို့သည် လူသားများကို စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆေးကို စွန့်လွှတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သားရဲအပေါ် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် တွန်းအားပေးသည့် တန်ဖိုးရှိမှု သို့မဟုတ် တန်ဖိုးရှိသောအချက် မရှိပါ။
21 Adar 03, 2022 - 18/51/XNUMX XNUMX:XNUMX
လေ့လာရန် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပြီး Shabbat သည် လူသားများထက် သာလွန်ကြောင်း ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်တစ်ခု ရှိပါသည်။
21 Adar 03, 2022 - 19/43/XNUMX XNUMX:XNUMX
ဒါဆို Gd မှာ အတင်းအကြပ်လုပ်ထားတဲ့ halakhic facts တွေကို ဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲ။ ဘုရားသခင်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ လူသားတွေကို ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကြားက ပဋိပက္ခဖြစ်မယ့်အစား ဘုရားသခင်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို အပေးအယူလုပ်တာထက် လူသားတွေကို ဒုက္ခပေးတာက ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားအမှန်တရားတစ်ခု ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
21 Adar 03, 2022 - 19/48/XNUMX XNUMX:XNUMX
ဘုရား၏လိုအပ်ချက်သည် သူ့အပေါ်၌လည်း တွန်းအားပေးခံရသည်၊ သို့မဟုတ် မလိုအပ်ဘဲ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကို ငြင်းပယ်ခြင်းအား အကြောင်းပြခြင်းမရှိပေ။
ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ အတင်းအကြပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ မတရားတာဖြစ်ဖြစ်၊ အကျင့်စာရိတ္တကို ထင်သလို မငြင်းပါဘူး။ မတူညီတဲ့ ဦးတည်ရာကနေ လာတဲ့အခါတိုင်း အဖြေက အတူတူပါပဲ။ စောင်က တိုတယ်၊ ခြေထောက် ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းကို ဖုံးထားနိုင်ပေမယ့် နှစ်ခုစလုံးကို မခြုံပါဘူး။
21 Adar 03, 2022 - 20/13/XNUMX XNUMX:XNUMX
ကောင်းပြီ၊ ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်က ဟယ်လာဆိုတဲ့ အချက်မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းဆီက ငါနားလည်ထားတာက halakhic ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေဟာ မင်းရဲ့ နယ်ပယ်မှာ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ မဟုတ်ဘူး ။
21 Adar 03, 2022 - 20/54/XNUMX XNUMX:XNUMX
ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေတာတွေ ရှိသေးတယ်။ သို့သော် ထိုထက်ကျော်လွန်၍ ဤလိုအပ်ချက်သည် OUGHT ဖန်တီးပေးသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အငြင်းအခုံမှာ အကျင့်စာရိတ္တတန်ဖိုးများကဲ့သို့ ဥပဒေများသည် သူ့အပေါ် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ အကျပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေက တန်ဖိုးတွေလို့ ထင်နေသေးပေမယ့် ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။
21 Adar 03, 2022 - 21/07/XNUMX XNUMX:XNUMX
ဒါက အရင်က တုံ့ပြန်မှုမှာ ငြင်းခုံခဲ့တယ်။ ဤလိုအပ်ချက်၏အမှန်တရားသည် သင့်အား ဖန်တီးရန်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် သီလ၏နယ်ပယ်မှ ဖြစ်သင့်ပြီး ဟလာခိဒ်နယ်ပယ်မှ မဟုတ်ပေ။ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ လူသားတွေကို မစမ်းသပ်ဘဲ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ပတ်သက်ရင် ငါ မသွားသင့်ဘူး။
21 Adar 03, 2022 - 21/12/XNUMX XNUMX:XNUMX
သေချာပေါက် အကျင့်စာရိတ္တ။ အချို့က လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် တန်ဖိုးထားသည်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ။ ဥပမာ၊ ဘုရားသခင်ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည် သမားရိုးကျသဘောအရ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ဝက်သားစားခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းသည်ပင် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအချက်ကို ဖော်ပြသည့်ပုံမပေါ်ပါ။
21 Adar 03, 2022 - 21/19/XNUMX XNUMX:XNUMX
ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် သူ့တွင်ရှိသော လိုအပ်မှုအချို့ကြောင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆန့်ကျင်သော ပညတ်တော်များကို အမိန့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သူအမိန့်မပေးမီတွင် သူ၏လိုအပ်ချက်ကို ဦးစားပေးရန် သို့မဟုတ် လူသားများအပေါ် စာရိတ္တမထိခိုက်စေရန် ရှောင်ရန်မှာ အကျပ်ရိုက်နေပါသည်။ ဤအကျပ်အတည်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရားနယ်ပယ်၌ တည်၏။ လူသား သို့မဟုတ် တိရိစ္ဆာန်များကို စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန် အကျပ်ရိုက်စေသည့် အကျပ်အတည်းကဲ့သို့ပင် ကိုယ်ကျင့်တရားနယ်ပယ်တွင် ရှိနေသည်။
21 Adar 03, 2022 - 21/32/XNUMX XNUMX:XNUMX
ထို့ကြောင့် (လိုအပ်မှုဟု ခေါ်ဆိုရန် သင်ရွေးချယ်သော) ဘာသာရေးတန်ဖိုးတစ်ခု ရှိနေပြီး ၎င်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တအကြား အကျပ်အတည်းတွင်သာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ မင်းမှန်တယ်ဆိုပါစို့၊ ဒါဆို ဘာဖြစ်မလဲ။ အငြင်းအခုံက ဘယ်မှာလဲ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဘာသာရေးတန်ဖိုးတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် လိုအပ်ချက်တစ်ခုနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးကြားက ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားအဆင့်မှာ မရှိပါဘူး။
22 Adar 03, 2022 - 10/57/XNUMX XNUMX:XNUMX
ကျွန်ုပ်၏ အသိပညာကို အတတ်နိုင်ဆုံးအားဖြင့် အရှင်ဘုရား မီချီက ဤသို့ဆိုသည်။
တစ် ဘုရားသခင်သည် သူတော်ကောင်းဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းကျိုးကို လိုလားသည်။
ခ ဘာသာတရားတစ်ခုသည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအမိန့်တစ်ခုနှင့် မတူပါ။
တတိယ။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းများအကြား ပဋိပက္ခတစ်ခုတွင်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အမိန့်ကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပဋိပက္ခသည် စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်သာဖြစ်သည် (Rabbi Lichtenstein ၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့် ဘာသာရေးခရိုင်များတွင် ပျံ့နှံ့နေသောသဘောထားကို နှစ်သက်သည်) ကို အဘယ်ကြောင့်မတောင်းဆိုသနည်း။
ဃ။ ဘာသာရေးအမိန့်ကိုလည်း ဘုရားသခင်အပေါ် အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေကြောင်း သေချာပေါက် လိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်၊ မဟုတ်ပါက သူသည် အဘယ်ကြောင့် အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အမိန့်ပေးသနည်း ။
နားလည်ရန်ကျန်နေသေးသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် ထိုပဋိပက္ခတွင် ဘာသာရေးအစီအစဥ်ကို ရွေးချယ်ထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပဋိပက္ခတစ်ခုဖြစ်ပွားရာတွင် အဘယ်ကြောင့် ကိုယ်ကျင့်တရားအစီအစဥ်ကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသနည်း။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းချက်မှာ ဘုရားသခင်က ပေးထားသည့် ဘာသာရေးအမိန့်ကို တားမြစ်ထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ အစောင့်အကြပ်များ ရပ်တန့်သွားကာ ပေးထားသော လက်တွေ့ဘဝတွင် သူသည် mitzvah မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆသောကြောင့်၊ ထို့ကြောင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အမိန့်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဤအရာအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏သား Ramad Shlita ၏ပါရမီရှင်နည်းလမ်းအရ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်၏ရွေးချယ်မှုများကို အသိအမှတ်မပြုသော (လွတ်လပ်မှုသိပ္ပံကိုကြည့်ပါ) ၏နည်းလမ်းကို သစ္စာစောင့်သိပါသည်။ နှင့် doc နှင့် il ။
22 Adar 03, 2022 - 14/06/XNUMX XNUMX:XNUMX
မင်းရဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ ပါရမီရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားကို ဖတ်ကြည့်ရင် သူကိုယ်တိုင် ရွေးထားပြီးသားဆိုတော့ ငါတို့ရေးတာ ခွင့်မပြုဘူးလို့ အတိအကျ သိလာလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် အဖြေရှာရန် မလိုအပ်ပါ။
Adar 23၊ 03 - 2022/14/16 တွင် ၁၂:၂၉၊
ဆိုလိုသည်မှာ ဟာလခဟ်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တအကြား အထောက်အထားမရှိဟု ဆိုလိုသည်။ ဤအရာများသည် မူအရ အမှီအခိုကင်းသော အမျိုးအစား နှစ်ခုဖြစ်သည် (၎င်းတို့ကြားတွင် အမြဲတမ်း ကွဲလွဲမှု မရှိသော်လည်း)။ လုပ်ရပ်တစ်ခုသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဟုတ်၊မဟုတ် တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် တားမြစ်ခြင်းရှိ၊ halakhic နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား အမျိုးအစားသည် မတူညီသော အမျိုးအစား နှစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရိတ္တနှင့် ဟလာခိ သင်ကြားမှုကြားတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသည့်ကိစ္စများတွင် တစ်နည်းတစ်ဖုံ ဆုံးဖြတ်ရပါမည် (၎င်းသည် ဟာလခကို အမြဲတမ်း မျက်နှာသာမပေးပါ)၊ သို့သော် ပဋိပက္ခဖြစ်တည်မှုမှာ သူ့ဘာသာသူ ပြဿနာမရှိပါ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာတန်ဖိုးနှစ်ခု (ဥပမာတွင် နာကျင်စေခြင်းဖြင့် အသက်ကို ကယ်တင်ခြင်းကဲ့သို့) အကြားတွင်လည်း ကွဲလွဲမှုများရှိပြီး halakhic value နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးလည်း ရှိမည်ကို ငြင်းဆိုစရာမရှိပေ။
ကော်လံ 15 မှကိုးကားချက်။ လန်ဒန်နှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် လိင်တူချစ်သူများဆိုင်ရာ သင်၏မှတ်ချက်။ တခါတရံ ဘာသာရေးကို မစောင့်ထိန်းသော ဆရာများ မဟုတ်ပါလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကွာခြားချက်ကို ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
Adar 23၊ 03 - 2022/14/43 တွင် ၁၂:၂၉၊
Trilogy ရဲ့ တတိယမြောက်စာအုပ်ရဲ့အစမှာ ဒါကို ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ကြီးမားသော ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ ဥပဒေသည် အမြဲတမ်း စိုးမိုးနေပါသည်။ ဥပမာ၊ အာမလက်လူမျိုး။ Torah ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး မိန့်မှာထားသည်။ သို့သော် စိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Shabbat ကဲ့သို့သော ပဋိပက္ခသည် မတော်တဆဖြစ်သောအခါ၊ Pikun ကို ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်အားဖြင့် Shabbat ၏အမိန့်မှ ဖယ်ထုတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။
ပညတ်တော်သည် တိုရာ၌ ထင်ရှားသောအခါ၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် တရားဟောခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်လျှင် ဤစည်းမျဉ်းသည် မှားယွင်းသည်ဟု သံသယဝင်လာပါသည်။
Adar 23၊ 03 - 2022/14/27 တွင် ၁၂:၂၉၊
ယုဒဘာသာတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောထားများအကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် ကျွန်ုပ်ပြောဖူးသည်မှာ၊ ဤကိစ္စတွင် သီလကို Torah ထက်သာလွန်သော အကျင့်စာရိတ္တကို ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း၊ Torah တွင် okimata လုပ်သော Rabbi Riskin နှင့် အကျင့်စာရိတ္တတွင် okimata ကျင့်သော ရိုးရာရဗ္ဗိများထက်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် Torah ၏ ထုံး တမ်း ဖြစ် သည် ။
ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရတာ တကယ်ကို ဝမ်းသာပါတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တနှင့်ဆန့်ကျင်သော ပြတ်သားသော Daurite halakhah ကိစ္စတွင်၊ အကျင့်စာရိတ္တကို ရွေးချယ်ရန် နေရာရှိပါသလား။ Halacha Durban ကကော။ Okimata ကို Halakhic ထုံးတမ်းစဉ်လာကို ဆန့်ကျင်သည့်တိုင် အကျင့်စာရိတ္တကို မဆန့်ကျင်သောနည်းဖြင့် Dauriyta halakhah အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသလား။
Adar 23၊ 03 - 2022/14/44 တွင် ၁၂:၂၉၊
ကျွန်တော်ရှင်းထားပါတယ်။ ဂမ္ဘီရပညာနဲ့ ပက်သက်လို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တံခါးများကို သော့ခတ်မထားပေ။
အပြစ်ကင်းသောမေးခွန်း။ မှန်ကန်သော အကျင့်စာရိတ္တရှိခြင်း (မြင့်မြတ်သော၊ ဥပမာ) - ဤအကျင့်စာရိတ္တသည် မည်သည့်နေရာတွင် မှတ်ပုံတင်သနည်း။ လူသတ်မှုနှင့် ခိုးယူခြင်းကို ခွင့်မပြုရဟု ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်ကိုယ်သဘောမှ ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါသလား။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် လူ့ပင်ကိုယ်မှ သင်ယူသောအရာ သို့မဟုတ် ရိုးရာလူမှုရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များမှ သင်ယူခဲ့လျှင် ၎င်းသည် ထိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို လက်မခံသောလူကို အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း မဟုတ်ပါ။ Torah နှင့် တစ်နည်းတစ်ဖုံ ဆက်စပ်နေပါက၊ ၎င်းသည် တစ်ဖန် ရေးထားသော မြင့်မြတ်သော တရားတော်ဖြစ်ပြီး၊ Torah နှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်မှာနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားကျောက်ပြားပေါ်တွင် ရေးထားသည်။ Torah သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သွန်သင်ထားပြီး သင်သည် မှန်ကန်၍ ကောင်းမှုပြုခဲ့သည်၊ သို့သော် မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား မသတ်မှတ်ပါ။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအမိန့်ဆိုသည်မှာ လူတိုင်းနားလည်သည် (၎င်းကို သူ၏နှလုံးသားကျောက်ပြားပေါ်တွင် ရေးထားသည်)။ ကိုယ်ကျင့်တရား၏ အကြောင်းအရာကို သီလထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းမှ သင်ယူသော်လည်း လိုက်နာရမည့်တာဝန်မှာ ဘုရားအလိုတော်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ကော်လံမှာ ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပါပဲ။ ဥာဏ်မရှိသူရှိလျှင် ဖျားနာသူဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်မဆိုင်ပါ။ မမြင်ရတဲ့ မျက်မမြင်တစ်ယောက်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလိုပါပဲ။
ဟလ္လခနှင့် သီလ အကြား ခြားနားချက်မှာ ပညတ်တော်၌ ဖြစ်သည်။ Torah ရှိ ပညတ်တော်များသည် Halacha နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တသည် ပညတ်တော်အောက်တွင် မရှိပါ။ ၎င်းသည် ပညတ်တော်မပါဘဲ ဘုရားအလိုတော်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပညတ်တရားပြင်ပတွင် ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာသည် Torah တွင်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အတွင်းတွင်မပေါ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Halacha ၌အကြောင်းအရာများကို Torah တွင်ရေးသားထားသည်။ ထို့ကြောင့် “သင်တို့သည် မှန်ကန်သော အကျင့်ကို ကျင့်ကြကုန်၏”ဟု အစုအပေါင်း၌ မိဿဗိုဇ်၏ ပိုင်းဝေစာရင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့ပေ။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ "ရိုးသားမှုနှင့် ကောင်းမြတ်ခြင်း" သည် သူ၏အခြေခံပင်ကိုယ်ဥာဏ်၌ လူသားတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်သည့် အရာဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသောအရာများကို လူသတ်မှုနှင့် မုဒိမ်းမှုအဖြစ် လက်ခံထားသော်လည်း ဘုရားမဲ့ဝါဒီများကို မေးသည့်မေးခွန်းမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်- သင်ဘာပြောချင်ပါလဲ။ သူ့အလုပ်ကျင့်ဝတ်က လူသတ်မှုလို့ ယူဆတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်။ လူသားအတွက် ပြင်ပကိုယ်ကျင့်တရားစနစ် ရှိကြောင်း သက်သေပြသော်လည်း၊ ဤစနစ်သည် ၎င်း၏ "ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ကောင်းမြတ်ခြင်း" တွင် ပါ၀င်သည်များကို အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်ဘဲ လူသတ်မှုဟု ယုံကြည်သော လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပြန်မေးပါမည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၊ အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ဘုရားသခင်လိုအပ်သည်ဟု ယူဆချက်ဖြင့် သင်ဖြေရှင်းနေသည့် ပြဿနာကို လေးလေးနက်နက် ပြောလိုပါသည်။
27 Adar 03 2022 - 16/19/XNUMX တွင် ၂၂:၀၄
ရောနှောနေရတယ်။ လူသတ်မှုကို တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတာ နားမလည်တဲ့သူကို မေးတာမဟုတ်ဘဲ တားမြစ်ထားပေမယ့် ကတိကဝတ်မရှိဘူးလို့ နားလည်တဲ့သူကို မေးပါတယ်။ ဒါက လုံးဝကွဲပြားတဲ့မေးခွန်းပါ။ နားမလည်သောသူသည် မျက်စိကန်း၏။ ငါ သူ့ကို ဘာပြောရမှာလဲ ဆိုလိုသည်မှာ အဖြစ်မှန်ကို မမြင်ဘဲ အရောင်များ၏ တည်ရှိမှုကို ငြင်းပယ်သော မျက်မမြင်များအတွက် ဥပမာ။
ငါသူတို့ကိုမေးခဲ့တာက ကိုယ်ကျင့်တရားအတွက်တရားမျှတမှုရဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားဥပဒေသတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး၊
ဘုရားမရှိရင် ငါလည်း ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ တရားတွေကို ချုပ်နှောင်ထားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဤခံစားချက်သည် အမှန်တကယ် တရားဝင်မှုမရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်နားလည်ထားသော ထင်ယောင်ထင်မှားတစ်ခုအဖြစ် ပယ်ချပါမည်။ ဘုရားသခင်သာလျှင် တရားဝင်မှုကို ပေးနိုင်သည်။
27 Adar 03 2022 - 16/25/XNUMX တွင် ၂၂:၀၄
ငါသဘောပေါက်တယ်။ အကျင့်စာရိတ္တတွင် ပါ၀င်သောအရာကို အခြေခံအားဖြင့် သင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်- ၎င်းကို လူသားတိုင်း သိကြပြီး၊ လူသတ်မှုနှင့် မုဒိမ်းမှုတို့သည် အကျင့်ပျက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တွင် မွေးရာပါရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ခေတ်ကာလများ ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း၊ ဤကျင့်ဝတ်သည် ၎င်း၏အဓိကအချက်ဖြစ်သော အကျင့်စာရိတ္တကို လူတိုင်းလက်ခံနိုင်စေရမည်ဟုလည်း အခြေခံအားဖြင့် ငြင်းခုံနေကြသည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီနှင့် ယုံကြည်သူကြား ကွာခြားချက်မှာ ယုံကြည်သူသည် ဤအကျင့်စာရိတ္တက သူ့ကို ဘာကြောင့် ချုပ်ကိုင်ထားရကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ငါနားလည်တယ်မဟုတ်လား
27 Adar 03 2022 - 16/26/XNUMX တွင် ၂၂:၀၄
ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဒါကို ကော်လံနဲ့ မူရင်းဆွေးနွေးမှုမှာ ရှင်းပြခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။
27 Adar 03 2022 - 16/33/XNUMX တွင် ၂၂:၀၄
နောက်ထပ် စာရင်းသွင်းသူ 3,094 ဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
စစ်ကြောင်း ၃၆ နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့သူများ၌ ဆင်ခြင်တုံတရားအပေါ် ယုံကြည်ချက်တစ်ခု ထူထောင်ခြင်း။
အနီရောင်ဖြင့် ဖြတ်ကျော်၍ ဘုရားသခင်ကို ရှုတ်ချခြင်း။
ဒူဒ ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)
Ori ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)
ဟိုင်း ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)
မီချီ ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)